Madaxa I MABAADIIDA AASAASIGA AH EE PUNTLAND QAYBTA 1aad ASTAAMAHA AASAASIGA AH Qodobka 1aad MAGACA IYO HIMILADA 1. Magaca Dawladdu waa Dawladda Puntland ee Soomaaliya. 2. Himilada Dawladda Puntland waa taabbagelinta nidaam dawladeed oo ku dhisan wadatashi, sinnaan iyo caddaalad bulsho oo waafaqsan Shareecada Islaamka, una horseedi karta dadkeeda nabad iyo xasillooni waarta iyo horumar dhinac walba ah oo ku jihaysan kor u qaadidda heerka nololeed ee dhammaan muwaadiniinta Puntland iyo ka qayb-qaadashada in himilooyinkaas ay gaaraan dhammaan dadka Soomaaliyeed. Qodobka 2aad SARRAYNTA SHARCIGA 1. Sharciga ayaa ka sarreeya qof kasta. 2. Dhammaan hayadaha Dawladda iyo dadweynuhuba waxay u hoggaansamayaan sharciga Qodobka 3aad MABAADIDA ASAASIGA AH 1. Awoodda oo dhan EEBBE ka sokow waxaa iska leh dadweynaha, waxayna u idmanayaan masuuliyiin ay u xilsaartaan si sharciga waafaqsan. Masuuliyiinta dalku waa adeegayaal dadweyne, xilkoodana waxay u gudan karaan oo kaliya sida uu sharcigu farayo ama uu bannaynayo. 2. Ma jiri karo qof, koox ama qayb ka mid ah bulshada oo awoodda dawladnimo u adeegsan kara si gaar ah.
Dastuurka Dawladda Puntland Ee Soomaaliy
Bogga 2 3. Hannaaka siyaasadeed ee Dawladda Puntland wuxuu ku saleysan yahay mabaadiida hogaamineed ee : b. Shareecada Islaamka; t.Is-xukunka Dadweynaha j. Maamul-wanaagga; x. Wada-tashiga; Kh.Horumarinta hiddaha iyo dhaqanka suubban ee Soomaaliyeed d. Danta guud oo laga hormariyo tan gaarka ah. r. Tartanka Xisbiyada Badan iyo xukunka oo lagu baahiyo dalka oo dhan. 4. Puntland waxay aqoonsan tahay mabaadiida aayo-ka-talinta ummadaha adduunka. 5. Puntland waxay taageereysaa in khilaafaadka caalamiga ah, kuwa cusub iyo kuwii hore u jireyba, lagu dhammeeyo wada hadal iyo hab nabadeed. Qodobka 4aad HANNAANKA XUKUNKA 1. Dawladda Puntland waa qayb ka mid ah Soomaaliya, xil ayaana ka saaran hirgelinta Dawlad Soomaaliyeed oo ku dhisan habka Federaaliga ah. 2. Awoodaha Dawladda Puntland ay ku wareejin doonto Dawladda Federaalka ee Soomaaliya iyo xuquuqaha ay yeelanayso Puntland, waxa ay ku imaanayaan wada xaajood iyo heshiis dhexmara Dawladda Federaalka iyo Dawladda Puntland, taas oo lagu qeexi doono Dastuurka Federaalka iyo kan Dawladda Puntland 3. Inta laga dhammaystirayo Dastuur federaal ah oo Puntland wax ka ansixisay ka dibna afti dadweyne lagu meelmariyey, Puntland waxay lahaaneysaa awood Dawlad madaxbannaan. 4. Dawladda Puntland waxaa u bannaanaanaysa in ay dib u eegto arrimaha ku xusan faqradaha 1aad, 2aad iyo 3aad ee isla qodobkan, haddii: b. Soomaalidu ku heshiin weydo qaab-dhismeed dawladeed oo aan ka hooseyn nidaamka Federaaliga ah. t. Ay daba dheeraadaan daganaansho laaanta iyo dagaallada ka aloosan qaybaha kale ee Soomaaliya.
______________________________________________________________________ Dastuurka Dawladda Puntland ee Soomaaliya
Bogga 3 5. Mowqifka cusub ee Xukuumadda Puntland ka qaadato arrimahaas waxaa cod saddex meelood laba (2/3) ku ansixinaya Golaha Wakiillada, ka dibna waxaa loo qaadayaa afti, sida ku cad qodobka 140-aad faqradiisa 1aad ee Dastuurkan. Qodobka 5aad DADKA 1. Dadka Dawladda Puntland waa dadka u dhashay Puntland iyo qof kasta oo Puntlandnimada ku helay qaab sharci ah. 2. Xeer u gaar ah ayaa qeexi doona Puntlandnimada, xaqa degenaanshada iyo kasbashada meeqaanka Puntlandnimada Qodobka 6aad TIROKOOBKA 1. Dadweynaha Punltland tobankii sanaba mar baa la tirokoobayaa. 2. Xeer gaar ah ayaa tilmaami doona Wakhtiga iyo habraaca tirakoobka. Qodobka 7aad DHULKA IYO SOOHDIMAHA 1. Dhulka Puntland waxa uu ka kooban yahay gobollada Bari, Nugaal, Sool, Cayn, karkaar, Mudug, Heylaan iyo Sanaag. 2. Midnimada dhulka Puntland waa lama taabtaan, laguma xadgudbi karo, lamana kala qaybin karo. 3. Puntland waxay soo dhaweyneysaa lana xaajooneysaa degmo iyo gobol kasta oo doonaya inuu ku soo biiro Dawladda Puntland. 4. Dhulka Puntland waxaa ku dhan hawada sare, berriga iyo dhulka hoostiisa, jiidda dhaqaalaha ee badda oo dhan 200 maylka badda ah oo ka bilawda halka uu ku dhammaado hirka ugu dambeeya, waxaana masuul ka ah Dawladda. Qodobka 8aad AFKA Afka rasmiga ah ee Dawladda Puntland waa Soomaaliga iyo Carabiga.
Qodobka 9aad DIINTA 1. Diinta Islaamku waa tan kaliya ee Dawladda Puntland ee Soomaaliya. 2. Diin aan tan Islaamka ahayn laguma faafin karo dalka Puntland. 3. Qawaaniinta iyo dhaqanka bulshada waxaa saldhig u ah diinta Islaamka. 4. Waxaa reebban xeer iyo dhaqan kasta oo ka hor imanaya Diinta Islaamka. Qodobka 10aad MAGAALO MADAXDA 1. Magaalo madaxda Dawladda Puntland waa Magaalada Garoowe waana fadhiga dhexe ee dawladda. 2. Magaalo madaxda waxaa lagu dhaqayaa xeer u gaar ah.
Bogga 5 Qodobka 11aad CALANKA, ASTAANTA IYO HEESTA DAWLADDA PUNTLAND 1. Calanka Dawladda Puntland waa afar geesle, labadii dhinac ee iska soo horjeedaa ay is leeg yihiin, kana kooban saddex midab oo kala ah:Qaybta sare waa buluug furan, dhexdana ku leh xiddig cad oo shan geesle ah, madaxyo simana leh, kana turjumaya calanka Jamhuuriyada Federaalka ee Soomaaliya. t. Qaybta dhexe waa midabka caddaanka ah kana turjumaya Nabadda Puntland j. Qaybta hoose waa midab cagaaran, kana turjumaya barwaaqada & khayraadka Puntland. 2. Astaanta Dawladda Punland waxay ka kooban tahay:b. Gaashaan ka kooban midabada calanka Puntland, oo midabka caddaanka ah dhexda kaga sawiran tahay Dhiil, taasoo u taagan Nabad & Caano. Gaashaanka dushiisa waxaa ku yaal rukumo dahabi ah. t. Gaashaanka waxaa hareeraha ka haya labo faras oo xamari ah, iskuna beegan, kuna taagan waran labo afle ah oo dusha sare ay ka haraynayaan labo caleemood oo dabiici ah. Waranka waxaa ku gadaaman maro xariir dahabi ah oo ay ku qoran tahay Dawladda Puntland. Madaxa II XUQUUQDA AASAASIGA AH IYO DAMMAANAD-QAADKA QOFKA Qaybta 1aad XUQUUQDA SHAKHSIGA IYO LAALIDEEDA Xubinta Koowaad XUQUUQDA SHAKHSIGA Qodobka 12aad SINNAANTA DADKA 1. Dhammaan dadku waa u siman yahay Sharciga hortiisa.
Bogga 6 2. Qofna laguma takoori karo midabka, diinta, dhalashada, jinsiyadda, hantida, fikradda uu aaminsan yahay, siyaasadda, afka iyo isirka. 3. Dastuurka ayaa dammaanad qaadaya xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. Qodobka 13aad XORRIYADDA CAQIIDADA 1. Qofka muslimka ahi caqiidadiisa kama noqon karo 2. Qofka aan muslimka ahayni xor ayuu u yahay Caqiidadiisa, lagumana khasbi karo mid kale. Qodobka 14aad XORRIYADDA FIKIRKA 1. Qof kasta xor buu u yahay fikraddiisa waana soo bandhigi karaa. Faafreeb horudhac ahi waa reebban yahay. 2. Qofku waxa uu fikraddiisa ku cabbiri karaa qaab hadal, saxaafadeed, qoraal, muuqaal, suugaan iyo habab kale oo sharciga iyo anshaxa waafaqsan. Qodobka 15aad AASAASIDDA IYO KA MID NOQOSHADA URURADA BULSHADA 1. Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu aasaaso, ka mid noqdo ama ka qayb qaato hawlaha ururada dhaqan-dhaqaale, bulsho, Isboorti iyo cilmi, haddaan sharci ka reebin. 2. Aasaasidda ururadu waa inay waafaqsan yihiin qaanuunka dalka iyo danaha ummadda Puntland. 3. Waxaa reebban ururada leh dabeecad qabiil ama ciidan. Qodobka 16aad XORRIYADDA DHAQDHAQAAQA 1. Qof kasta waxa uu u madaxbannaan yahay inuu dalka ka maro ama ka dego meel kasta oo uu rabo iyo inuu dalka ka baxo kuna soo laabto goortii uu doono.
Bogga 7 2. Sharci iyo xeer-hoosaadyo u gaara ayaa caddeyn doona xadaynta xaqa dhaqdhaqaaqa. Qodobka 17aad LAHAANSHAHA HANTIYEED 1. Qof kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu hanti yeesho, u maamusho, ugana faaiideysto si sharciga waafaqsan. 2. Sharciga ayaa qeexaya duruufaha iyo habraaca lagu xaddidi karo xaqa shakhsiga ee la xiriira hantidiisa. 3. Xorriyadda wax soo saarku way bannaan tahay, waxaase shardi u ah in wax soo saarayaashu ay oofiyaan shuruudaha sharci iyo maamul ee dalka u degsan. 4. Qofna lagama qaadi karo khidmad/kharash, hantidiisana lalama wareegi karo iyadoo aan loo cuskan sababo sharciga waafaqsan. Qodobka 18aad NOLOSHA QOFKA IYO NABADGELYEYNTA JIRKIISA 1. Qof kasta waxa uu xaq u leeyahay noloshiisa marka laga reebo qof lagu fuliyey xukun maxkamadeed oo kama dambays ah. 2. Qof kasta waxa uu xaq u leeyahay nabadgelyada jirkiisa iyo sharaftiisa. 3. Waxaa reebban denbiyada laga galo xaqa nolosha iyo nabadgelyada qofka, sida xasuuq, jirdil, xarig iyo dil aan sharciga waafaqsanayn. Qodobka 19aad MADAXBANNAANIDA QOFKA 1. Qofna madaxbannaanidiisa lagama qaadi karo, xannibaad kasta oo lagu sameeyana waa inay sharciga ku caddahay. 2. Addoonsiga iyo ka-ganacsiga dadku way reebban yihiin. 3. Madaxbannaanida qofka waxaa shardi u ah in aaney ka hor imanayn Shareecada Islaamka, xeerarka, anshaxa guud, xasiloonida dalka ama xuquuqda qof kale.
Bogga 8 Qodobka 20aad MAGANGELINTA SIYAASADEED & ISU-CELINTA EEDAYSANEYAASHA/DENBIILAYAASHA 1. Qofka shisheeyaha ah oo weydiista Dawladda Puntland magangelyo siyaasadeed waa la siin karaa, haddii uu buuxiyo shuruudaha u dhigan magangelinta, iyada oo la tixgelinayo heshiisyada caalamiga ee aan ka hor imaanayn shareecada islaamka. 2. Waxaa reebban in muwaaddin Puntland ah, ama qof soomaali ah oo puntland ku nool loo gacan geliyo dal kale. 3. Puntland way u gacangelin kartaa dalkii uu ka soo baxsaday denbiile ama eedaysane shisheeye ah haddii uu jiro heshiis isu-celin oo u dhexeeya Puntland iyo dalka weydiistay celintiisa/celinteeda. 4. Qofna looma dhiibi karo arrimo siyaasadeed awgood. Qodobka 21aad AMMAANKA HOYGA 1. Hoyga iyo meelaha kale ee la deggan yahay waxay leeyihiin xurmayntooda. 2. Ma bannaana baaridda, basaasidda iyo gelidda hoyga amar Garsoore oo sababaysan laaantiis, haddii aanu gelin hoyga qof dembiile ah oo boolisku ku raad-joogo ama aanu isla wakhtigaas fal-dembiyeed ka dhacayn hoyga dhexdiisa. 3. Waxaa waajib ah in si toos ah loogu akhriyo degganaha amarka Garsooraha inta aan lagu dhaqaaqin baarista, baarahana waxaa ka reebban ku xad-gudubka sharciga. Qodobka 22aad XAQA SAXAAFADDA 1. Saxaafadda iyo warbaahinta xorta ahi waa ay ka madaxbannaan yihiin faragelin dawladeed, waxayna u hoggaansamayaan sharciga oo keliya. 2. Xeer gaar ah ayaa xadidaya xorriyadda saxaafadda.
Qodobka 23aad XORRIYADDA ISGAARSIINTA Qofna lama faragelin karo waraaqihiisa boostada, xiriirkiisa isgaarsiineed iyo qoraalladiisa gaarka ah, marka laga reebo xaaladaha sharcigu banneeyo baaritaankooda, dabagalkooda, ama dhegaysigooda. Marka taas lagu tallaabsanayo waa inuu jiraa amar garsoore oo sababaysan. Qodobka24aad BANNAANBAXYADA 1. Muwaadin kasta oo Puntlandar ah waxa uu xor u yahay in uu abaabulo, ka qaybqaato bannaanbaxyo ku salaysan hab nabadgelyo, si xeerka waafaqsan. 2. Bannaanbaxyada waxaa lagu joojin karaa sababo lid ku ah Diinta Islaamka, caafimaadka, anshaxa, amniga iyo xasilloonida dalka. Qodobka 25aad XAQA DACWADDA IYO ISDIFAACA 1. Qof kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu dacwad Xeerka waafaqsan ka furto maxkamadda awoodda u leh. 2. Qof kasta waxaa uu xaq u leeyahay inuu iska difaaco maxkamdda horteeda. 3. Qof kasta oo aan iska difaaci karin maxkamadda horteeda, ama aan karin inuu qareen qabsado, dawladda ayay waajib ku tahay in ay u qabato qareen difaaca. 4. Xeer gaar ah ayaa nidaaminaya sida uu caddaalad ku helayo qofkii aan awoodin bixinta ajuurada maxkamadaha. Qodobka 26aad DEMBIGA IYO CIQAABTA 1. Ciqaabta dembi waxay ku koobnaanaysaa qofka geystay fal-dembiyeedka.
Bogga 10 2. Qofna looma qaban karo, xiri karo, loomana ciqaabi karo fal markii uu galay aan dembi ku ahayn sharciga. 3. Ciqaab aan maxkamadi goaamin cidna laguma fulin karo. Qodobka 27aad XUQUUQDA EEDAYSANAHA 1. Eedaysanaha waxaa loo aqoonsan yahay dembilaawe ilaa si Xeerka waafaqsan maxkamadi ugu xukunto gelid denbi. 2. Eedaysanuhu wuxuu xaq u leeyahay in la dhawro nabadgelyadiisa iyo sharaftiisa aadaminnimo. 3. Eedaysanaha laguma hayn karo meel aan Xeerku bannayn. 4. Eedeysane kasta waa in 48 saacadood gudahood lagu hor-geeyo maxkamad. 5. Eedaysanaha waa in maxkamadda awoodda u lihi si tifaftiran ugu akhrido uguna macnayso dembiga lagu soo oogey. 6. Eedaysanuhu waxa uu xaq u leeyahay in ay soo booqdaan eheladiisa, qareenkiisa, dhakhtarkiisa iyo asxaabtiisa, waana la damiinan karaa haddii sharcigu oggol yahay. 7. Eedaysanuhu waxa uu xaq u leeyahay in uu qareen difaaca qabsado. 8. Eedaysanaha laguma khasbi karo qirashada dembiga loo haysto. Qodobka 28aad XUQUUQDA QOFKA XUKUMAN 1. Qofka ay maxkamadi xukuntay oo xiran waxa uu xaq u leeyahay ilaalinta nabadgelyadiisa iyo sharaftiisa aadaminnimo. 2. Xukumanuhu waxa uu xaq u leeyahay in ay soo booqdaan eheladiisa, qareenkiisa, dhakhtarkiisa iyo asxaabtiisa. 3. Qofka maxbuuska ahi waxa uu xaq u leeyahay daryeel caafimaad, cunto iyo waxbarasho. 4. Qofka maxbuuska ah waxaa lagu dhaqayaa xuquuqda caalamiga ah ee maxaabiista.
Bogga 11 5. Xukumanuhu waxa uu xaq u leeyahay in uu Rafcaan ka qaato xukunkii maxkamaddu ku ridday. Xubinta Labaad LAALIDDA XORRIYADAHA MADANIGA AH Qodobka 29aad XAALADAHA DEGDEGGA AH 1. Haddii ay dalka ka dhacaan dagaallo,weerar lagu soo qaado,gadood, masiibooyin dabiici ah, cudurro faafa iyo xasilloonida dalka oo qalalaaso ku dhaco dammaanadaha ku cad qodobbada,14,16,21,22,23 iyo 24 si ku meel gaar ah waa loo laali karaa. Laalidda xuquuqda ku xusan qodobka 24 laguma dabbaqi karo kulamada iyo bannaanbaxyada diimeed,dhaqan iyo isboorti 2. Xaaladda degdegga ah waxaa lagu soo rogi karaa dalka oo dhan ama qaybo ka mid ah. 3. Golaha Xukuumadda oo keli ah ayaa soo rogi kara xaalad degdeg ah. 4. Xaaladda degdegga ah kama ay badan karto 30 beri, haddiise ay weli taagan yihiin xaalaadihii khasbay Golaha Wakiillada oo keli ah ayaa cusboonaynsiin kara muddo aan 30 beri ka badnayn. 5. Haddii ay suulaan duruufihii kalifay xaaladda degdegga ah ama aan Golaha Wakiilladu cusboonaysiin taagnaanmayso. Qaybta Labaad XUQUUQDA BULSHADA Xubinta 1aad QOYSKA Qodobka 30aad XUQUUQDA QOYSKA Qoysku waa aasaaska bulshada, oo ka bilowda nin iyo haweenay qaan gaaray oo si sharciga waafaqsan isku guursaday iyo carruurtooda, sharciga ayaana dammaanad qaadaya sugnaantiisa.
Bogga 12 Qodobka 31aad XUQUUQDA CARRUURTA 1. Carruur waxaa loola jeedaa qof kasta oo toban iyo shan sano (15) ka yar. 2. Ilmuhu waxa uu xaq u leeyahay nolol, magac, jinsiyad, korriimo, waxbarasho iyo daryeel caafimaad.. 3. Waxaa reebban shaqada wax u dhimaysa carruurta noloshooda, caqiidadooda, dhaqankooda, korriimadooda iyo waxbarashadooda. 4. Waxaa reebban in la soo rido ilmaha caloosha hooyada ku jira, haddii aanay jirin xaalad adag oo hooyada nolosheeda khatar gelineysa, uuna caddeeyo dhakhtar aqoonteeda leh. Qodobka 32aad WAXBARASHADA 1. Qof kasta xaq ayuu u leeyahay inuu waxbarasho helo. 2. Horumarinta iyo baahinta waxbarashadu waa waajib saaran Dawladda. 3. Dawladda ayaa u xilsaaran ciribtirka akhris/qoris la'aanta. 4. Waxbarashada aasaasiga ah ee carruurtu waa khasab, Dawladda ayaana u xilsaaran helitaanka agabka iyo hawlwadeennada waxbarashada. Marka ay duruuftu saamaxdo, dawladdu waxa ay kor u qaadeysaa heerka waxbarashada khasabka ah. 5. Dawladdu waxay dhiirrigelineysaa isla maarkaasna tayeyneysaa waxbarashada diineed ee dugsiyada Quraanka. 6. Waa masuuliyadda Dawladda diyaarinta, tayeynta iyo hubinta ku dhaqanka manhaj midaysan ee heerarka dugsiyada hoose, dhexe iyo sare. 7. Barashada iyo tarbiyadda diinta Islaamku waa dariiqad aasaasi ah, dhammaan heerarka waxbarashada hoose, dhexe iyo sare. 8. Qofka qaangaarka ahi waa u madaxbannaan yahay doorashadiisa waxbarasho iyo xirfadeed, Dawladdana waxaa waajib ku ah dhiirrigelinta waxbarashada dadka waaweyn iyo tan haweenka.
Bogga 13 9. Waxaa la furan karaa dugsiyo waxbarasho, kuwo xirfadeed iyo jaamacado gaar ah oo waafaqsan manhajka Dawladda, kuna salaysan baahida iyo siyaasadda waxbarashada dalka. 10. Dawladda xil ayaa ka saaran horumarinta hiddaha iyo dhaqanka. 11. Dawladda waxaa waajib ku ah in ay taabbageliso tacliinta sare. 12. Xeer gaar ah ayaa nidaaminaya waxbarashada gaarka ah. Qodobka 33aad CAAFIMAADKA 1. Waa masuuliyadda Dawladda in ay daryeesho caafimaadka guud ee dadweynaha, ka hortag iyo daaweynba, gaar ahaan carruurta iyo haweenka. 2. Si loo fuliyo waajibaadkaas, Xukuumaddu waxay dajineysaa nidaam caafimaad ee waddani ah. 3. Dawladdu Puntland waxay ogoshahay adeegga caafimaad ee gaarka ah, furashada rugo caafimaad iyo cusbitaalo. Adeegyada gaarka ah ee caafimaadka waxaa nidaaminaya xeerka, waxaana kormeeraya Xukuumadda. Qodobka 34aad AGOOMAHA, CURYAAMADA, GARAAD-DHIMANKA IYO DADKA GABOOBEY 1. Agoonta, curyaamiinta, garaad-dhimanka,dadka gaboobey iyo qof kasta oo aan is daryeeli karin, cid daryeeshaana aanay jirin, dawladda ayay waajib ku tahay in ay daryeesho. 2. Dawladdu waa in ay dhiirrigelisaa, samaysaana hayado gargaara iyo xarumo lagu xannaaneeyo dadka ku xusan faqradda 1aad ee qodobkan. 3. Xeer gaar ah ayaa qeexaya dadka loo aqoonsanayo in aaney isdaryeeli karin. Qodobka 35aad XUQUUQDA HAWEENKA Dawladda waxaa waajib ku ah horumarinta iyo dammaanad qaadka xuquuqda haweenka. si waafaqsan diinta Islaamka.
Bogga 14 Haweenku waxay xuquuda kala siman yihiin ragga, marka laga reebo wixii ILAAH u kala gaar yeelay. Qodobka 36aad XUQUUQDA DHALLINYARADA IYO HORUMARINTA ISBOORTIGA 1. Dawladdu waxay ahmiyad gaar ah siineysaa daryeelka, barbaarinta, horumarinta dhalinyarada iyo isboortiga. 2. Dhismaha ururo dhallinyaro, daryeelka dhallinyarada iyo horumarintooda waxaa lagu qeexayaa xeer gaar ah. Qodobka 37aad XUQUUQDA SHAQAALAHA 1. Dawladdu waxay u xil saaran tahay shaqo-abuurista iyo tayeynta tababarrada shaqaalaha. 2. Waxaa reebban shaqo khasab ah, haddii aan qaanuunku si kale u tilmaamin. 3. Shaqaale kasta waxa uu xaq u leeyahay mushahar u dhigma shaqada uu qabto. 4. Shaqaale kasta waxa uu xaq uu leeyahay maalin nasasho ah toddobaadkiiba, fasax sannadeed, fasaxa ciidaha ee qaanuunku jideeyay. Haweenka waxaa intaas u dheer fasaxyada dhalmada iyo naas-nuujinta. Shaqaalaha fasaxa ku jira waxba iska dhimi mayaan xuquuqdooda mushaar. 5. Dawladdu waa in ay daryeeshaa shaqaalaha jir ahaan iyo damiir ahaanba. 6. Shaqaaluhu waxa ay xaq u leeyihiin in ay cabashadooda ku muujiyaan bannaanbax ama shaqo-joojin si xeerka waafaqsan. Ciidammada qalabka sida shaqa joojin ma samayn karaan. 7. Shaqaalaha iyo loo shaqeeyayaashuba waxay xaq u leeyihiin iney yeeshaan ururro maareeya una dooda danahooda. 8. Shaqaale kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu doorto shaqada iyo loo shaqeeyaha uu doorbido. 9. Dhismaha, doorka iyo waajibaadka ururrada shaqaalaha waxaa lagu qeexi doonaa xeer gaar ah.
Bogga 15 Qodobka 38aad BADBAADADA SHAQAALAHA 1. Dawladda ayaa dejinaysa sharciga shaqaalaha isla markaana samaynaysa hayadaha dammaanad qaadaya xaqa hawlgabka shaqalaha gaarka ah iyo kan dawladdaba. 2. Qof kasta oo xil u haya dawladda oo ku dhaawacma, ku jirrada ama ku naafooba shaqada, waxa uu xaq u leeyahay daryeel qaanuunka waafaqsan. 3. Qof kasta oo Dawladda u shaqeeya oo ku geeriyooda hawlgal, waxaa laga bixiniyaa magdhow sharciga waafaqsan. 4. Xukuumaddu waxay shaqaalaha Dawladda iyo kuwa gaarka ahba u dejineysaa hab dammanad-qaad shaqaale oo ay maalgeliyaan dawladda, loo shaqeeyaha iyo shaqaaluhuba. Qaybta 3aad MUWAADINIINTA IYO HABRAACA DOORASHOOYINKA Qodobka 39aad MUWAADINNIMADA 1. Qof kasta oo u dhashay Puntland ama ku kasbaday Puntlandnimada qaab sharci ah waxaa loo aqoonsanayaa inuu yahay muwaadin Puntlandar ah. 2. Muwaadinka Puntlandarka ah lumen maayo muwaadinnimadiisa, haddii uu qaato jinsiyad dal kale. Qodobka 40aad WAAJIBAADKA MUWAADINKA 1. Muwaadin kasta waxaa waajib ku ah: b. Dhawridda diinta Islaamka, Dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka iyo kuwa caalamiga ee aan ka hor imaanayn sharciga. t. Adkaynta midnimada ummadda iyo ilaalinta jiritaanka qarannimada Puntland. j. Codbixinta xilliyada doorashooyinka. x. Bixinta canshuuraha ku waajibay.
Bogga 16 kh.)Ka qaybgalka difaaca Puntland markii loogu yeero ama ay la soo gudboonaato. 2. Sharciga ayaa qeexaya ciqaabta lagu mutaysanayo gudasho la'aanta waajibaadka ku xusan qodobkan. Qodobka 41aad XUQUUQDA MUWAADINKA Muwaadin kasta oo daadiisu gaartay siddeed iyo toban (18) sano, wuxuu xaq u leeyahay: b. Inuu ka qayb-galo hawlaha doorashooyinka iyo inuu cod bixiyo. t. Inuu sameeyo ama ku biiro urur ama xisbi siyaasadeed. j. In uu xilliyada doorashada u tartamo xilalka dalka, haddii uu shuruudaha buuxiyo. Qodobka 42aad XAQA BANDHIGIDDA CABASHADA 1. Muwaaddin kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu cabashadiisa qoraal ugu diro Madaxweynaha, Baarlamaanka, Xukuumadda, iyo madaxda kale ee dawladda. 2. Xafiiska uu qoraalka cabashadu u socdo waa inuu ka jawaabo (30) beri gudahood. Qodobka 43aad HAKINTA XUQUUQDA SIYAASADEED IYO XIL-QABASHO EE MUWAADINKA Xuquuqda muwaadinka waa la hakin kara haddii ay dhacdo: In qofka maxkamadi ku rido xukun ciqaabeed oo kama dambays ah, oo ah noocyada lagu lumiyo xuquuqda siyaasadeed iyo xil qabasho ee ku cad xeerka ciqaabta. In qofku yahay garaad-dhimman, ama Maxkamadi caddayso inaanu gudan karin xilkiisa. Qodobka 44aad DOORASHOOYINKA 1. Muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha doorashada wuxuu xaq u leeyahay inuu wax dooran karo lana dooran karo.
Bogga 17 2. Xubnaha Golaha Wakiillada iyo Golayaasha Degmooyinka waa mansabyada dadweynuhu tooska u dooranayaan. 3. U codaynta mansabyadaas waa inay u dhacdaa si caddalad iyo xor ah oo waafaqsan nidaam sharci ah oo ay maamulayso hayad madaxbannaan oo leh awood Dastuuri ah. 4. Codbixintu waxay noqonaysaa mid caam ah, dadku u simanyahay, shakhsi ah, qarsoodi ah, waxaana reebban in qof lagu farageliyo doorashada meesha uu codka marinayo. 5. Sharciga ayaa xadidaya aagagga doorashooyinka ee Golaha Wakiillada iyo Golayaasha Degmooyinka. Tirada kuraasta uu gobol ku yeelanayo Golaha wakiillada iyo xubnaha golayaasha degmooyinka waxay ku xirnaanaysaa hadba inta uu leeg yahay dadweynaha ku nool gobolka ama degmada. 6. Taariikhda ay qabsoomeyso doorashadu waxaa goynaya Guddiga doorashada, waase in aaney noqon laba bilood ka yar ama afar bilood ka badan dhammaadka muddada golayaasha wakiillada iyo deegaanka markaas xilka haya. 7. Inta aan la gudo gelin doorashooyinka waa inuu jiro sharci gaar ah oo lagu hagayo arrin kasta oo la xariirta doorashada. Qodobka 45aad DADKA AAN IS- SHARRIXI KARIN 1. Dadka ka tirsan Ciidammada Qalabka Sida ee aan hawlgabka ahayan iyo garsoorayaashu, xubin kama noqon karaan xisbiyada siyaasadda, isumana sharrixi karaan doorashooyinka. 2. Hawlwadeennada dawladda isma sharrixi karaan, haddii aanay iska casilin xilalka ay hayaan. Sharciga doorashada ayaa sheegaya wakhtiga kama dambaysta ah ee ay tahay inay is casilaan, haddii ay doonayaan inay tartanka doorashooyinka ka qaybgalaan. Qodobka 46aad XISBIYADA SIYAASADEED 1. Dawladda Puntland waxaa lagaga dhaqmayaa nidaamka xisbiyada badan.
Bogga 18 2. Tartanka doorashadu waa u furan yahay dhammaan ururada buuxiya shuruudaha looga baahanyahay. 3. Saddexda urur siyaasadeed ee ugu codadka badan tartanka kowaad ee Golayaasha Deegaanka ayaa noqonaya saddexda xisbi siyaasadeed ee rasmiga ah. 4. Labadii xilli doorasho kadibba waxaa furmaya tartanka ururada siyaasadeed. 5. Waxaa reebban xisbiyada iyo ururrada leh muuqaal ciidan ama qabiil. 6. Qofkii magac xisbi doorasho ku gala kuna guuleysta kursi, kadibna ka baxa xisbiga, wuxuu luminayaa kursigii xisbiga ee uu ku guuleystey. 7. Hantida Qaranka ee si guud looga faaiidaysto sida garoommada ciyaaraha, barxadaha iyo warbaahinta Dawladda, xisbiyadu si siman ayay ugu fushan karaan ololayaashooda siyaasadda iyo hawlahooda xisbi oo kaleba. Goobaha kale ee dawladda iyo hantida dawladda looma adeegsan karo hawlo xisbi iyo ololayaal doorasho. 8. Qof kasta oo lagu eedeeyo inuu hanti qaran u isticmaalay dano xisbi, maxkamad ayaa la horgeynayaa. 9. Xeerar iyo nidaamyo ayaa lagu maamulayaa axsaabta siyaasadeed, kuwaasoo lagu qeexayo shuruuc kala gadisan oo ay Xukuumaddu soo jeediso, Golaha Wakiilladuna ogolaado. Qodobka 47aad SHURUUDAHA FURASHADA XISBI SIYAASADEED 1. Xisbina kama qayb geli karo doorashooyin haddii aanu sharciyayn Guddiga Doorashada Puntland (GDP). 2. Si xisbi loo sharciyeeyo waxaa shardi ah inuu xarumo ku leeyahay Gobollada oo dhan, isla markaasna leeyahay barnaamij siyaasadeed iyo xeer-hoosaad haga hawlihiisa. 3. Guddiga Doorashada Puntland ayaa ka baarandegeya qoraallada xisbigu soo bandhigo, waxaana la isku hortaagi karaa, haddii barnaamijka ama xeer-hoosaadkiisa ay khilaafsan yihiin Dastuurka iyo shuruucda kale.
Bogga 19 4. Sharci gaar ah oo baarlamaanku ansixiyay ayaa qeexaya dhaqangelinta qodobka 46.2, shuruudaha iyo habraacyada kale ee la xariira sharciyaynta ururrada siyaasadda. 5. Haddii saddexda xisbi ee sharciga ah midkood burburo ama la xiro, Guddiga Doorashada Puntland ayaa ururkii siyaasadeed ee kaalinta ku xigta galay doorashada Golayaasha Degaanka ee ugu dambeeyay ugu yeeraya inuu noqdo xisbiga siyaasadeed ee kaalinta bannaanaatay buuxinaaya. Madaxa III DHAQAALAHA Qodobka 48aad HANNAANKA DHAQAALAHA Hannaanka dhaqaalaha ee Puntland waa in dhammaan dadka Puntland ay helaan nolol u qalanta karaamadooda bani-aadaminnimo iyo in qof kastaa helo arrimaha lama huraanka ah, si waafaqsan mabaadiida caddaaladda bulshada. Qodobka 49aad DHAQAALAHA SUUQA XORTA AH 1. Hannaanka ganacsi ee Puntland wuxuu ku salaysan yahay suuqa xorta ah, wuxuuna dhirrigelinayaa, isla markaasna dammaanad qaadayaa maalgashiga wadaniga ah iyo kan ajnebiga ahba. 2. Hawlaha ganacsiga waxaa saldhig u ah tartanka xorta ah. 3. Sharciga ayaa dhiirrigelinaya, hagayana tartanka xorta ah iyo xakamaynta suuqxirashada. Qodobka 50aad KAALINTA DHAQAALAHA EE DAWLADDA 1. Dawladdu waxay dhiirigelinaysaa horumarin dhaqaale oo joogtaysan, waxayna kaashanaysaa dhaqaalaha gaarka loo leeyahay si kor loogu qaado wax soo saarka, kobcinta ganacsatada. Wax soo saarayaasha yaryar iyo iskaashatooyinku waxay yeelanayaan mudnaan gaar ah.
Bogga 20 2. Dawladda ayaa ilaalineysa khayraadka dalka, waxayna dammaanad qaadaysaa in cid walba si sharciga waafaqsan oo joogtaysan uga faaiidaysato. 3. Dawladdu waxay ilaalinaysaa awoodda wax-gadashada ee dadweynaha, gaar ahaan kuwa danyarta ah. Qodobka 51aad SHIRKADAHA WADAAGGA AH 1. Xukuumaddu waxay samayn kartaa, kana qayb-geli kartaa shirkado wadaag ah oo ay saamilay ka yihiin maalgeliyayaal waddani ah iyo kuwa ajnebi ahba. 2. Madaxda shirkadaha wadaagga ah waxaa isla magacaabaya wasaaradda hawlaheedu la xiriiraan iyo saamileyda gaarka ah. 3. Habka dhismaha, maamulka iyo saami-qaybsiga Sharikadaha Wadaagga ah waxaa qeexaya xeer gaar ah. Qodobka 52aad GADIDDA HANTIDA UMMADDA 1. Wareejnta hanti kasta ee dawladdu leedahay waa in la mariyo habraac sharciga waafaqsan. 2. Lama iibin karo hanti ummadeed haddii aanay Dawladdu dhinac ka ahayn. 3. hanti kasta oo qiimaheedu ka yar yahay US$ 50,000 (konton kun US$), waxaa awood u leh Golaha Xukuumadda, wixii ka badan US$50,000 (konton kun US$), waxay u baahanaysaa ogolaanshaha Golaha Wakiillada. 4. Gadidda hantida dawladda waxaa loo marayaa habka tartanka xaraashka furan. Qodobka 53aad QARAMAYNTA HANTIDA GAAR AHAANEED 1. Hantida qofku ku helay si xeerka waafaqsan, waxaa loola wareegi karaa dan guud oo keli ah, iyadoo isla markaana la bixinayo magdhow u dhigma. 2. Xeer ayaa xadaynaya hantida gaarka ah ee loola wareegi karo dan guud iyo habraaca loo marayo qaramaynteeda.
Bogga 21 Qodobka 54aad KHAYRAADKA DABIICIGA AH 1. Khayraadka dabiiciga ah ee Puntland waxaa leh dadka Puntland, waxaana looga faaiideeysan karaa si waafaqsan sharciga. 2. Dawladda Puntland ayaa ka masuul ah ilaalinta iyo ka faaiidaysiga khayraadkeeda dabiiciga ah. 3. Dawladda Puntland waxay heshiis la geli karta shirkado waddani iyo kuwo ajnebi ah, waxayna siin kartaa ruqsadda ka faaiidaynta khayraadka dabiiciga ah. 4. Ruqsad kasta oo la xiriirta ka faaiidaysiga khayraadka dabiiciga ah waxaa bixinteeda soo habaynaaya Golaha Xukuumadda waxaana oggolaanaya Golaha Wakiillada. 5. Qaabka saami qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee Puntland waxaa qeexaya xeer gaar ah oo uu Golaha Xukuumaddu u gudbinaayo Golaha Wakiilada si uu u ansixiyo. Qodobka 55aad ILAALINTA DEEGAANKA 1. Dawladda iyo dadweynaha Puntland waxaa waajib ku ah ilaalinta, dhawrista iyo soo kabashada deegaanka, waana in si cad loogu qeexo heshiis kasta oo la galayo, isla markaana waafaqsan xeerka ilaalinta deegaanka. 2. Waxaa reebban baabiinta kaymaha, laynta duurjoogta, xaalufinta badda, diqaynta dhulka, hawada iyo badda. Cid kasta oo geysata xadgubyada ku xusan faqraddan waxay mutaysanaysaa ciqaab sharciga waafaqsan. 3. Waxaa reebban dhoofinta dhuxusha, xoolaha dheddiga ah, duur-joogta iyo wax kasta oo saameyn ku yeelan kara xaalufinta deegaanka. 4. Deegaan lagama samayn karo meel aan ku habboonayn, Dawladduna ogolaan. 5. Waxaa reebban xirmaynta dhul-daaqsimeedka 6. Dawladdu waxay ilaalinaysaa, islamarkaana xilliyeynaysaa ugaarsiga badda. 7. Xeer gaar ah ayaa nidaamin doona ilaalinta deegaanka
Bogga 22 Madaxa IV Qaab-Dhismeedka Dawladda Qaybta Koowaad Hayadaha Aasaasiga ah ee Dawladda Qodobka 56aad Hannaanka Dawladda Hannaanka Dawladda Puntland waa baarlamaani; Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku Xigeenka waxaa dooranaya Golaha Wakiillada. Qodobka 57aad QAYBAHA DAWLADDA Dawladdu waxay u qaybsantaa saddex qaybood oo kala ah: b. Qaybta Sharci-dajinta (Golaha Wakiillada). t. Qaybta Fulinta (Golaha Xukumadda). j. Qaybta Garsoorka (Maxkamadaha) Qodobka 58aad KALA SOOCNAANTA QAYBAHA DAWLADDA 1. Qayb kasta waxay u madaxbannaan tahay gudashada waajibaadyada, xilalka iyo awoodaha dastuurku u jideeyey, qaybina qaybta kale ma hoos timaado, marka laga reebo arrimo gaar ah oo uu Dastuurku si cad u qeexayo. 2. Fulinta waajibaadka iyo xilalka qaybi leedahay qayb kale waa ay ka reebban tahay. 3. Qofna xubin kama noqon karo isku mar, wax ka badan hal qayb oo dawladda ka mid ah. Qodobka 59aad WADASHAQAYNTA QAYBAHA DAWLADDA Iskaashiga iyo wadashaqaynta saddexda qaybood ee dawladdu waa waajib Dastuuri ah, waxayna ku wada shaqaynayaan si sharciga waafaqsan.
Bogga 23 Qaybta 2aad XEER-DEJINTA Xubinta 1aad Golaha Wakiillada Qodobka 60aad GOLAHA WAKIILLADA 1. Awoodda Xeer-Dejinta ee Puntland waxaa leh Golaha Wakiilladda oo matala shacabka Puntland oo dhan. 2. Inta laga helayo tiro koob sugan, Golaha Wakiilladu waxaa uu ka koobnaanayaa 66 xilldhibaan oo dadweynuhu ku soo doorto codbixin guud oo toos ah. 3. Muddada Golaha Wakiilladu waa shan (5) sano laga bilaabo maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Xildhibaannada Golaha Wakiillada dib ayaa loo soo dooran karaa. 4. Golaha Wakiilladu waxa uu si rasmi ah hawshiisa u bilaabayaa soddon (30) maalmood gudahood, laga bilaabo maalinta natiijada doorashadu lagu dhawaaqo. Qodobka 61aad SHURUUDAHA LAGAGA MID NOQON KARO GOLAHA WAKIILLADA Golaha Wakiillada waxaa loo dooran karaa qof kasta oo buuxiya shuruudaha soo socda:b. In uu yahay muwaadin Puntland ah, Muslim ah, guta waajibaadka diiniga ah, xilkas ah, anshax wanaagsan, miyirkiisu dhan yahay, da'diisuna aanay ka yarayn soddon (30) sano. t. In aan xuquuqdiisa muwaadinnimo xukun maxkmadeed lagaga laalin shantii sano ee la soo dhaafay. In uu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ama waayo-aragnimo u dhiganta Ka hor inta aan qofka la ogolaan musharaxnimadiisa, Guddiga Doorashadu waa in uu hubiyo in musharaxu buuxiyey shuruudaha ku cad qodobkan.
Qodobka 62aad SABABAHA LAGU LUMIN KARO XUBINNIMADA GOLAHA WAKIILLADA 1. Xubinnimada Golaha Wakiillada waxaa lagu lumin karaa haddii b. ay xubintu geeriyooto. t. la soo gudboonaato xaalad xilgudasho laaaneed oo joogta ah. j. xubintu ay istiqaalad keento, Goluhuna ka aqbalo. x. Xubintu ay ka maqnaato labo kalfadhi oo caadi ah ee isku xiga sabab laaan. 2. Haddii xubin ka mid ah Golaha Wakiillada ay lumiso xubinnimadeeda waxaa badalkeeda soo galaya qofkii xubin sugaha u ahaa. 3. Sharciga doorashada ayaa tilmaamaya habraaca loo marayo xulashada xubinta badaleysa, waana in lagu dhaariyo 30 beri gudahood. Qodobka 63aad HABRAACA GOLAHA WAKIILLADA 1. Golaha wakiilladu, fadhiga ugu horreeya waxa uu iska dhex-dooranayaa guddoomiye iyo laba ku-xigeen oo kala ah koowaad iyo labaad. 2. Kalfadhiga koowaad ee Golaha, waa in lagu meelmariyo xeer-hoosaadka lagu socodsiinayo hawlaha Golaha. 3. Goluhu wuxuu iska dhex dooranayaa guddi joogta ah oo ururiya, fuliyana hawlaha golaha si ku meel gaar ah kal-fadhiyada dhexdooda. 4. Habka codaynta Goluhu waa gacan taag, ama qarsoodi iyo habka codaynta ee elektarooniga ah. 5. Fadhiyada Goluhu waa u furan yihiin dadweynaha, hase ahaatee haddii xukuumadda ama hogaanka Goluhu codsado fadhi albaabadu u xiran yihiin
Bogga 25 isla fadhiga guud ee Golaha ayaa Goaan ka gaaraya. 6. Goluhu wuxuu yeelanayaa xoghaye joogto ah, oo aan xubin ka ahayn Golaha Wakiillada, Waxaana magacaabaya guddoonka golaha. Qodobka 64aad AWOODAHA GOLAHA WAKIILLADA Golaha Wakiilladu wuxuu leeyahay awoodaha iyo xilalka soo socda: 1. Dib u eegidda, Ogolaanshaha, diidmada, wax-ka-bedelidda iyo burinta Xeerarka Puntland 2. Ansixinta/diidmada xaalad dagaal iyo meelmarinta heshiis nabdeed marka xukuumaddu soo jeediso 3. Inuu cod kala bar iyo hal ( + 1) tirada xubnaha Golaha ku Ansixiyo heshiis amaah qaadasho ee Puntland la gasho amaahiye ajnabi ah. 4. Inuu cod kala bar iyo hal ( + 1) tirada xubnaha Golaha ku ansixiyo heshiisyada caalamiga ah ee Dawladda Puntland dhinac ka tahay. 5. Ansixinta/ diidmadda degmo ama gobol cusub oo xukuumaddu soo jeediso. 6. Ka doodista, kormeeridda, dhaliilidda iyo talo-ku-biirinta siyaasadda iyo barnaamijka wax- qabadka xukuumadda. 7. Hubinta iyo daba-galka meel marinta xeerarka goluhu ansixiyey. 8. Goluhu wuxuu dooranayaa Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku-Xigeenka, oo lagu dooranayo, si shakhsi, sinnaan. Toos ama qarsoodi, Marka 1aad iyo Marka 2aad waa sadex meelood laba (2/3) tirada guud ee xubnaha Golaha Wakiillada, marka 3aad waa hal dheeri. 9. Goluhu wuxuu dooranayaa Difaacaha xuquuqda Adanaha, (3) saddexda xubnood oo ka mid noqonaya guddiga Doorashada iyo (2) labada garsoore oo ka mid noqonaya maxkamadda dastuuriga ah, waxaana loo marayaa habraaca doorashada ee Golaha Wakiillada. 10. Ansixinta/diidmada hawl wadeennada golaha fulinta ee xasaanad siinta u baahan.
Bogga 26 11. Ansixinta/cellinta barnaamijka waxqabad ee Xukuumadda. 12. Ansixinta/ celinta wax-ka-bedelka miisaaniyadda iyo is-bedel kasta oo lagu sameeyo madaxyadeeda. 13. Ogolaanshaha/diidmada xisaab-xirka miisaaniyadda sanadkii hore. 14. Ogolaanshaha canshuuraha ay xukuumaddu ka qaadayso dadweynaha ka hor inta aan lagu dhaqmin. 15. Ogolaanshaha/diidmada xaaladda degdegga ah ee xukuumaddu soo saarto muddo 30 casho guduhood ah. Haddii goluhu diido wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan, hase yeeshee hawlihii lagu fuliyey waxay noqonayaan ansax, haddii aan maxakamadda dastuuriga ahi u aqoonsan mid dastuuuka ka soo horjeeda. 16. Inuu ku ansixiyo xukuummadda kala bar iyo hal (+1) tirada guud ee xubnaha Golaha, mid mid ka badan ama dhammaantood. 17. Wuxuu u yeeri karaa masuuliyiinta sarsare ee dawladda si wax looga weydiiyo hawlaha loo idmaday. Haddii masuul loo yeeray cudur daar laaan ka baaqsado inuu hortago Golaha ama guddi hoosaadyadiisa, Goluhu wuxuu wargelinayaa madaxweynaha waxaana loo qaadayaa codka kalsoonida. 18. Xasaanad ka qaadista masuul kasta oo goluhu doorto ama meel mariyo xil u magacaabistiisa 19. Haddii Masuul xasaanad leh la qabto isagoo dembi culus faraha kula jira, waxaa la weydiisanayaa Golaha Wakiillada socodsiinta dacwaddiisa, goluhuna wuxuu ogolaanayaa marka uu hubiyo ka dib. 20. Ogolaanshaha/diidmada daabacaadda lacagta. 21. Ogolaanshaha hindisayaasha xukuumadda ee la xiriira curinta ama baabiinta hayadaha dawladda. 22. In uu u gudbiyo Golaha Xukuumadda talooyinka la xiriira ku dhaqanka Miisaaniyadda iyo wax ka bedelidda xeerarka Maaliyadda kadib marka uu Goluhu dhegeysto warbixinta hanti-dhowrka guud.
Qodobka 65aad KALFADHIYADA GOLAHA WAKIILLADA 1. Golaha Wakiilladu waxa uu yeelanayaa laba kalfadhi oo caadi ah sannadkiiba, kuna kala aaddan bilaha Juun iyo Oktoobar, wuxuu kaloo yeelan karaa Kalfadhiyo aan caadi ahayn. 2. Kalfadhiga aan caadiga ahayan, waxaa isugu yeeri kara Guddoomiyaha Golaha Wakiillada, Madaxweynaha, ama waax () xubnaha Golaha Wakiillada, kadib marka la helo codsi sababeysan. Qodobka 66aad KALA DIRIDDA GOLAHA WAKIILLADA 1. Golaha Wakiillada waxaa la kala diri karaa markii: b. Ay is casilaan, aqlabiyadda Golaha Wakiilladu. t. Goluhu fariisan waayo labo kalfadhi oo isku xiga oo caadi ah sabab laaan. 2. Markii ay dhacaan qaar ka mid ah ama dhamaantood arrimaha ku xusan faqradda 1aad xarfaha b iyo t, Madaxweynuhu wuxuu Maxkamadda Dastuuriga ah u gudbinayaa qoraal uu ku dalbanayo sugnaanshaha arrimaha ku xusan faqradda 1aad. 3. Markii ay u caddaato maxkamadda Dastuuriga ah gelidda faqrada 1aad xarfaha b iyo t, waxey Madaxweynaha u gudbinaysaa in ay sugnaatay eedeynta lagu soo oogay Golaha Wakiillada. 4. Madaxweynuhu marka uu helo caddaynta Maxkamadda Dastuuriga ah, wuxuu soo saarayaa go aanka kala dirista Golaha, wuxuuna ku dhawaaqayaa in Gole cusub lagu soo doorto muddo (45)casho ah gudohood. Qodobka 67aad KALSOONI KALA NOQOSHADA WASIIRADA 1. Golaha Wakiilladu wuxuu kalsoonida kala noqon karaa wasiirada mid, ka badan ama dhammaantood. 2. Kalsooni kala-noqoshada wasiirada waxaa soo jeedin kara ugu yaraan lix (6) Xildhibaan.
Bogga 28 3. Ka doodidda mooshinka kalsooni kala-noqoshada Wasiirada waa in ay ogolaadaan ugu yaraan saddex meelood oo meel (1/3) xildhibaannada Golaha Wakiillada. 4. kala bar iyo hal (1/2+1) tirada xubnaha Golaha ayaa kalsoonida kala noqon kara Wasiirada. 5. Haddii cod kalsooni kala-noqosho uu meelmaro, Madaxweynuhu waa inuu magacaabo beddelka Golihii ama Wasiirkii codka kalsoonida waayey; Goluhu hawshiisu waa uu sii wadanayaa ilaa Gole cusub laga magacaabo, hase yeeshee ma bilaabi karaan barnaamij cusub. 6. Madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu hal mar Golaha Wakiillada dib ugu celiyo magacaabista xubnaha Golaha Xukuumadda ee kalsoonida waayey. 7. Haddii ay Xukuumaddu dhacdo, Madaxweynuhu wuxuu 21 beri gudaheed Golaha Wakiillada ku horgeynayaa Xukuumad cusub si loo ansaxiyo. Xubinta 2aad Habka Sameynta Sharciga Qodobka 68aad CURINTA SHARCIYADA Golaha wakiillada waxaa mashruuc-sharci horgeyn kara oo keli ah: b. xubin kasta oo ka mid ah Golaha Wakiillada. t. Golaha Xukuumadda. j. Tiro muwaadiniin ah oo aan ka yarayn 5.000 (shan kun) oo qof oo cod bixiyeyaal ah. Qodobka 69aad NIDAAMKA HAL-ABUURKA MUWAADINIINTA 1. Muwaadiniinta soo bandhigeysa codsi qoraal ah , waa in la hubsado warqadahooda aqoonsi ama ugu yaraan magacyadooda, dadooda, saxiixyadooda, iyo inay caddeeyaan inay yihiin muwaadiniin Puntlandar ah. 2. Codsiga waa inuu la socdo soo jeedinta mashruuc sharci ah iyo magacyada ugu yaraan laba qof oo lagala soo xiriiro.
Bogga 29 3. Mashruuc sharci ee ku saabsan cashuur, kharashka dawladda, difaaca dalka ama amniga, muwaadiniintu ma soo jeedin karaan. 4. Golaha Wakiilladu waxaa la gudboon in ay hal-abuurkaas ku qiimeeyaan kalfadhiga socda ama kan ku xiga, jawaabna siiyaan codsadayaasha. Qodobka 70aad DOODDA GOLAHA EE MASHAARIICDA SHARCIYADA 1. Golaha Wakiilladu waa in uu mashruuc-sharci oo kasta uga doodo qodob qodob, uguna codeeyo. 2. Sharci kasta oo Goluhu meelmariyo waa in laga sameeyo saddex nuqul oo rasmi ah oo ay saxiixaan hogaanka Goluhu loona diro Madaxweynaha. 3. Xeer Goluhu diiday dib looguma soo celin karo isla kal fadhiga markaas socda. Qodobka 71aad SAXIIXA MADAXWEYNAHA IYO FAAFINTA 1. Madaxweynuhu muddo soddon (30) beri gudohood, waa inuu ku saxiixo ama ku diido xeer kasta oo Golaha Wakiilladu ogolaaday. 2. Marka Madaxweynuhu saxiixo xeerka wuxuu amrayaa in faafinta rasmiga ah lagu soo saaro saddexda nuqul ee asalka ah, waxaana lagu kaydinayaa Xafiisyada Madaxtooyada, Golaha Wakiillada & Garyaqaanka Guud. 3. Xeerku wuxuu dhaqan galayaa shan iyo toban (15) maalmood gudahood, laga bilaabo maalinta faafinta rasmiga ah lagu soo saaro. Qodobka 72aad DIIDMADA QAYAXAN EE MADAXWEYNAHA Madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu diidmada qayaxan isku hortaago sharci uu meelmariyay Golaha Wakiilladu, isaga oo diidmadiisa raacinaya qoraal sababaysan.
Bogga 30 Qodobka 73aad JEBINTA DIIDMADA QAYAXAN 1. Diidmada qayaxan ee Madaxweynaha waxaa Golaha Wakiilladu ku jebin karaan markii ay isla sharcigaas mar labaad u codeeyaan kuna meelmariyaan aqlabiyad saddex meelood laba meelood (2/3). 2. Hogaanka Goluhu wuxuu u dirayaa Madaxweynaha sharcigii oo uu la socdo qoraalkii uu ku jabiyay diidmada qayaxan. 3. Madaxweynuhu marka uu helo qoraalka waa in uu saxiixo Xeerka kuna amro Garyaqaanka Guud in uu ku soo saaro faafinta rasmiga ah muddo shan iyo toban (15) beri gudohood. Qaybta 3aad FULINTA Qodobka 74aad HAYADDA FULINTA 1. Hayadda Fulinta ee Dawladda Puntland waxay ka kooban tahay Madaxweynaha, Madaxweyne Ku-Xigeenka, Wasiirrada, Wasiir Ku-Xigeennada iyo dhammaan Saraakiisha Sare iyo shaqaalaha awoodooda toos u hoos yimaada. 2. Hayadda Fulinta ee dawladda waxaa haga Madaxweynaha ama Madaxweyne KuXigeenka haddii uu Madaxweynuhu maqan yahay. Qodobka 75aad GOLAHA XUKUUMADDA Golaha Xukuumaddu waxa uu ka kooban yahay Madaxweynaha, Madaxweyne KuXigeenka, Wasiirrada iyo Wasiir Ku Xigeennada. Qodobka 76aad AWOODAHA IYO MASUULIYADAHA GOLAHA XUKUUMADDA Golaha xukuumaddu wuxuu leeyahay masuuliyadaha soo socda: b. Dejinta, xiriirinta iyo hirgelinta hannaanka siyaasadeed ee ku saabsan amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada.
Bogga 31 t. Kala nidaaminta awoodaha hayadda fulinta ee Dawladda. j. Xukuumaddu waxay soo rogi kartaa canshuuro cusub, waxayna is beddello ku samayn kartaa kuwo hore u jiray, iyadoo la waafajinayo baahida dalka mar walbana laga ansixinayo Golaha wakiillada. x. Soo jeedinta iyo Oggolaanshaha miisaaniyad-sannadeedka Dawladda oo muujinaya dakhliga Xukummaddu filayso inuu soo galo iyo tafaasiisha kharashyada xukuumadda iyo hayadaha kaloo dawliga ah ay filayaan in loo isticmaalo sannadmaaliyadeedkaas oo ay ku jiraan mushaharooyinka shaqaalaha Dawladda, waana in la horgeeyo Golaha Wakiillada, saddexda bilood ee sanadka ugu dambeeya gudahood. kh. Oggolaanshaha xeerka ku dhawaaqidda xaaladda degdegga ah, iyadoo laga ansixinayo Golaha Wakiillada soddon (30) beri Gudahood. d. Oggolaanshaha samaynta hayado madaxbannaan iyo kuwa ay Dawladdu qayb ka tahay, dabadeedna xeerkooda loo gudbiyo Golaha Wakillada. r. Magacaabidda Garsoorayaasha Maxkamadda Sare, labo (2) garsoore oo Maxkamada Dastuuriga ah ku biiraya, Xeer-Ilaaliyaha Guud, Hanti dhowrka Guud iyo Gudoomiyaha Bankiga, ka dibna la horgeeyo Golaha Wakiillada si uu u ansixiyo. s. Inay ka baaraandegaan, goaanna ka gaaraan dhammaan arrimaha uu Madaxweynuhu Golaha u soo bandhigo. Qodobka 77aad HABRAACA GOLAHA FULINTA 1. Shuruudaha la doonayo inuu buuxiyo qof kasta oo loo magacaabayo Wasiir ama Wasiir ku-xigeen waxay la mid yihiin kuwa xubinta Golaha Wakiillada oo ay u raacdo heer aqooneed oo gaarsiisan ugu yaraan Jaamacad iyo waayo-aragnimo la xiriirta hawsha Wasaaradda loo magacaabayo. 2. Madaxweynaha, Madaxweyne ku-xigeenka, Wasiirada, Wasiir ku xigeenada iyo Dhammaan hawl-wadeennada sarsare ee Dawladdu ma geli karaan ganacsi gaar ah inta ay xilka hayaan.
Bogga 32 3. Madaxweynaha, Madaxweyne ku-xigeenka, Wasiirada, Wasiir ku xigeennada iyo hawl-wadeennada sarsare ee Xukuumaddu waa in ay hantidhowrka guud u caddeeyaan hantidooda bisha ugu horreysa ee ay xafiiska la wareegaan. 4. Dhammaan awaamiirta, wareegtooyinka iyo xeer-hoosaadyada ay Xukuumaddu soo saarto waa in ay saxiixaan Madaxweynaha ama Wasiirka hawshiisu ay la xiriirto.. 5. Dhammaan Goaannada Golaha Wasiirradu ku gaaraan aqlabiyad waa masuuliyadwadareed. 6. Golaha Xukuumaddu waa inuu xil-wareejin u sii diyaariyaa Golaha ku xiga laba bilood ka hor dhammaadka muddada xil-hayntiisa. Qodobka 78aad SHURUUDAHA DOORASHADA MADAXWEYNAHA & MADAXWEYNE KU XIGEENKA 1. Muwaadin kasta oo Puntlandar ah waa u furan tahay in uu u tartamo Madaxweyne ama Madaxweyne Ku-Xigeen haddii uu buuxiyo shuruudaha xilka oo ah:b. Inuu yahay muwaadin Puntland ah, Muslim ah, ku dhaqma diinta Islaamka, miyirkiisu dhan yahay, dadiisuna aanay ka yarayn afartan (40) sano, qabin xaas ajnabi ah inta uu xilka hayana guursan karin. t. Inuu leeyahay tacliin sare, waayo aragnimo hogaamineed, aqoon la xiriirta dhaqanka iyo hiddaha Soomaaliyeed, dalkana ku sugnaa labadii sano ee ugu dambaysay. j. Inaan xuquuqdiisa muwaadininimo goaan maxkamadeed lagu hakin shantii sano ee ugu dambeysay. x. In uusan hore u gelin khiyaamo qaran ama ku xad gudbin xuquuqda baniaadamka. 2. Musharraxiinta jagada Madaxweynaha ama Madaxweyne ku-xigeenku waxay ka imaan karaan Golaha Wakiillada iyo dadweynahaba. 3. Haddii xubin ka mid ah Golaha Wakiillada loo doorto Madaxweyne ama Madaxweyne ku-xigeen wuxuu bannaynayaa xubinnimadii Golaha Wakiillada, waxaana beddelaya qofkii xubin- sugaha u ahaa.
Bogga 33 Qodobka 79aad MUDDADA XILKA Muddada xilhaynta Madaxweynaha iyo Madaxweye ku-xigeenku waa shan (5) sano, laga bilaabo maalinta natiijada Doorashada lagu dhawaaqo, labo jeer oo keli ah ayaana la soo dooran karaa. Qodobka 80aad AWOODAHA IYO MASUULIYADAHA MADAXWEYNAHA 1. Madaxweynuhu waa madaxa Dawladda iyo Guddoomiyaha Golaha Fulinta, waana astaanta midnimada dadka Puntland. 2. Madaxweynuhu wuxuu masuul ka yahay ilaalinta diinta Islaamka, Dastuurka, Difaaca dalka iyo Qawaaniinta kale ee Puntland. 3. Madaxweynuhu waa Taliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida. 4. Madaxweynuhu, isaga oo la tashanaya Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu soo dhisayaa Xukuumadda 21 beri gudahood laga bilaabo marka la doorto. Madaxwynuhu wuxuu Xubnaha Xukuumaddiisa ka dhex xulan karaa Golaha Wakiillada iyo dadweynahaba. 5. Madaxweynuhu, isaga oo la tashanaya Madaxweyne Ku-Xigeenka, wuxuu awood u leeyahay in uu magacaabo ama xilka ka qaado Xubnaha Golaha Wasiirrada, madaxda hayadaha madaxabannaan iyo madaxda kale ee Dastuurka ama shuruucda kale u ogolyihiin. 6. Madaxweynuhu wuxuu curiyaa ama ogolaadaa si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka, siyaasadda xukuumaddiisu fulinayso ee la xiriira waaxyaha maamulka guud. 7. Madaxweynuhu wuxuu galaa wada-xaajoodyada la xiriira shuruudaha Dawladda Puntland uga qayb galeyso Jamhuuriyad Soomaaliyeed ee Federaal ah, wuxuuna la saxiixayaa Dawladda Federaalka ah heshiis, kaasoo u baahnaan doona in laga ansaxiyo Golayaasha Xukuumadda iyo Wakiillada. 8. Madaxweynuhu wuxuu amraa, horana u mariyaa xiriirka caalamiga ah ee Puntland, wuxuuna ka xaajoodaa dabadeedna saxiixaa heshiisyada caalamiga ah. 9. Madaxweynuhu wuxuu si rasmi ah u qaabilaa wufuudda ajnebiga ah ee Puntland soo booqda, wuxuuna u aqoonsadaa in ay marti dawladeed yihiin.
Bogga 34 10. Madaxweynuhu wuxuu billado iyo shahaado sharafyo guddoonsiiyaa muwaadiniinta Puntland iyo kuwa ajnebiga ah ee mutaysta. 11. Wuxuu leeyahay fidinta saamaxaadda dembiyada siyaasadda iyo kuwa kaleba, marka uu helo soo jeedinta hayadaha shuruucda ee ku shaqada leh, marka laga reebo Qisaasta iyo Xuduuda shareecada Islaamku jidaysay. 12. Madaxweynuhu wuxuu furaa, hadalna ka jeediyaa kalfadhiyada Golaha Wakiillada. 13. Madaxweynuhu wuxuu soo saaraa xeer xaalad degdeg ah si uu uga hortago dhibaatooyinka cirib-dambeed-xumadu ka dhalan karto, sida: b. Musiibo dhacday, sida abaaro, duufaan, daadad, iwm. t. Dagaal sokeeye ama dagaal ay Dawladda Puntland ku dhawaaqday, ama j. Rabshado/kacdoon gudaha ah ee loola jeedo in lagu dumiyo jiritaanka Puntland. 14. Madaxweynuhu wuxuu soo saaraa xeerka xaaladda degdegga ah soddon (30) maalmood gudahood, isagoo horgeynaya Golaha Wakiillada si uu u ansixiyo, sida uu qabo qodobka 29-aad ee Dastuurku. 15. Madaxweynuhu wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqaa taariikhda Hayadda Doorashadu u astaysay qabashada doorashada. 16. Madaxweynuhu wuxuu soo saaraa xeer qeexaya in la fuliyo shuruucda Golaha Wakiilladu gudbiyeen. Ma jiri karo xeer ka horimanaya sharci Golaha Wakiilladu gudbiyeen. 17. Madaxweynuhu wuxuu ku hawlgalayaa masuuliyadaha iyo awoodaha kale ee sharciga Puntland u ogolaanayo. 18. Madaxweynuhu markuu la tashado Madaxweyne ku xigeenka wuxuu magacaabaa Guddoomiyaha iyo garsoorayaasha Maxkamada Sare. 19. Madaxweynaha wuxuu magacaabaa Guddoomiyaha, Garsoorayaasha iyo Xeer Ilaalinta Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida.
Bogga 35 Qodobka 81aad AWOODAHA IYO MASUULIYADAHA MADAXWEYNE KU-XIGEENKA 1. Madaxweyne Ku-Xigeenku wuxuu qabtaa xilalka Madaxweynaha marka uu dalka ka maqan yahay, ama uusan si ku meelgaar ah xilkiisa u gudan karin. 2. Madaxweyne Ku-Xigeenku wuxuu kala taliyaa Madaxweynaha magacaabidda iyo xilka-qaadista Wasiirrada, Wasiir Ku-Xigeennada iyo Saraakiisha sarsare ee Dawladda. 3. Madaxweyne Ku-Xigeenku wuxuu fuliyaa hawlaha Madaxweynuhu u wakiisho ee aan ka baxsanayn awoodiisa. 4. Madaxweyne Ku-Xigeenka waxaa loo dhaarinayaa xilka Madaxweyninimo, haddii uu Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo, xilka laga qaado ama ay la soo gudboonaato xaalad xil gudasho laaan joogta ah, wuxuuna haynayaa inta ka harsan muddadii xilka Madaxweynaha. 5. Haddii ay dhacdo xaaladda ku xusan faqradda 4aad ee qodobkan, Golaha Wakiilladu waxa uu 30 maalmood gudahood ku soo dooranayaa Madaxweyne ku-xigeen cusub. 6. Haddii Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku-xigeenku isku mar geeriyoodaan, is wada casilaan ama xilka laga wada qaado, waxaa xilkooda sii qabanaya Guddoomiyaha Golaha Wakiillada inta laga soo dooranayo Madaxweyne iyo Madaxweyne Ku-Xigeen cusub, muddo soddon (30) maalmood gudahood ah. Qodobka 82aad EEDAYNTA IYO XIL KA QAADISTA MADAXWEYNAHA IYO MADAXWEYNE KU-XIGEENKA 1. Haddii Madaxweynaha ama Madaxweyne Ku-Xigeenka lagu eedeeyo ku-xadgudub Dastuur, khiyaamo qaran iyo xil gudasho laaan waxaa la marayaa habraaca soo socda: b. Ugu yaraan waax (1/4) xubnaha Golaha Wakiillada ama Xeer-Ilaaliyaha Guud waa inay bilaabaan habraaca eedeynta Madaxweynaha ama Madaxweyne KuXigeenka, iyagoo Golaha Wakiillada u gudbinaya caddeymaha eedeynta, t. Ka doodida eedeynta Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka waa inay ogolaadaan ugu yaraan kala bar iyo hal ( +1) tirada xubnaha Golaha. j. Golaha Wakiilladu wuxuu ka baaraandegayaa eedaymaha la soo hordhigay, waxaana eedaysanaha la siinayaa fursad isdifaac.
Bogga 36 x. Madaxweynaha ama Madaxweyne ku xigeenka waxaa xil ka qaadis lagu samayn karaa markii si qarsoodi ah Golaha Wakiilladu ugu cadeeyo saddex meelood labo (2/3) tirada Xubnha Golaha. 2. Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku-Xigeenku dalka kama maqnaan karaan muddo ka badan lixdan (60) beri, sabab laaan. Qodobka 83aad XILALKA WASIIRKA 1. Wasiirku waa masuulka ugu sarreeya wasaaradda loo magacaabay, siyaasad ahaan iyo hagidda maamulka. 2. Wasiirku wuxuu fuliyaa siyaasadda xukuumadda ee la xiriirta wasaaradiisa. 3. Wasiirka, isaga oo la tashanaya Wasiir ku-xigeenka wuxuu goaamiyaa siyaasadda hawl-fulinta wasaaradda iyo shaqaalaheeda. Qodobka 84aad XILALKA WASIIR KU-XIGEENKA 1. Wasiir ku-xigeenku waxa uu qabanayaa dhammaan xilalka Wasiirka marka uu maqan yahay ama uusan si ku-meelgaar ah xilka u gudan karin. 2. Wasiir Ku-Xigeenka wuxuu kala taliyaa Wasiirka dhammaan waxqabadka wasaaradda. 3. Wasiir Ku-Xigeenku wuxuu fuliyaa hawlaha uu u cayimo Wasiirku oo aan ka baxsanayn masuuliyadda Wasiirka. Qodobka 85aad WAKAALADAHA GAARKA AH 1. Golaha Xukuumaddu wuxuu abuuri karaa Wakaalado Gaar ah oo loo xilsaarayo hawlo cayiman. 2. Wakaaladaha Gaarka ah waxay yeelanayaan xeer u gaar ah oo laga ansaxiyo Golaha Wakiillada.
Bogga 37 Qodobka 86aad CIIDAMADA NABADGELYADA 1. Ciidamada Nabadgelyadu waxay u xilsaaran yihiin sugidda amniga gudaha iyo xuduudaha Dawladda Puntland, waxayna ka kooban yihiin: b.Daraawiishta. t. Booliska. j. Nabadsugidda. x. Asluubta. 2. Xeer gaar ah ayaa nidaaminaya dhismaha iyo waajibaadka ciidan kasta. Qodobka 87aad MAXKAMADAHA CIIDAMADA 1. Maxkamadaha ciidamadu waxay gaar u yihiin qaadista dembiyada ay galaan xubnaha ciidamada oo keli ah iyo ciddii isu ekeysiisa. 2. Maxkamadaha Ciidamada iyo xeer-ilaaliyaashooda waxaa nidaamiya xeer gaar ah. Qodobka 88aad GUDDIGA CULIMADA DIINTA Xukuumadda Puntland waxay magacaabeysaa Guddi Culimo ee diinta Islaamka: b. Guddiga wuxuu ka koobnaanayaa sagaal (9) xubnood oo caan ku ah aqoonta Shareecada Islaamka. t. Guddiga waajibaadkiisu waxa ay noqonayaan in ay Dawladda kala taliyaan arrin kasta oo khuseysa Shareecada Islaamka, gaar ahaan marka looga baahdo iswaafajinta Shareecada Islaamka iyo Xeerarka Puntland. j. Waxaa kaloo Guddiga Culimada lagala tashanayaa magacaabista garsoorayaal Shareecada Islaamka ee ka hawlgala Maxkamadaha kala duwan ee Puntland, hadba sidii loogu baahdo. x. In ay caddeyn ka bixiyaan masaaisha diiniga ah ee looga baahdo. .
Bogga 38 kh. Guddiga culimadu waa in aanay ka mid noqon xisbiyo siyaasadeed inta ay xilka hayaan. d. Xeer gaar ah ayaa hagaya hawlaha xubnaha guddiga culimada Qaybta 4aad GARSOORKA XUBINTA KOOWAAD NIDAAMKA GARSOORKA Qodobka 89aad QAAB-DHISMEEDKA IYO MABAADIIDA 1. Hayadda Garsoorka ee Puntland waxa ay ka kooban tahay: b. Maxkamadda Sare. t. Maxkamadda Dastuuriga. j. Maxkamadaha Rafcaanka ee Gobollada x. Maxkamadaha Darajada koowaad. Kh.Guddiga sare ee Maamulka Garsoorka d. Xeer-Ilaalinta Guud. 2. Hayadda Garsoorka ee Puntland oo kaliya ayaa xukun ridi karta, bixin karta amar fulin xukun dastuuri, madani, ciqaab, ganacsi, maamul, arrimo shaqaale iyo arrimo kale oo uu sharcigu jideeyay. 3. Is qabadyada ka dhasha heshiisyada Puntland la gasho maalgaliye ajnabi ah waxaa lagu xallinayaa maxkamad dhex-dhexaad oo labada dhinac isla ogolaadeen. 4. Garsoorayaashu waa in aynan qaban hawlo ka horimanaya garsoornimadooda. 5. Dhageysiga dacwooyinka waa ay u furantahay dadweynaha, hase yeeshee sharciga ama garsooruhu wuu goaansan karaa si kale, isagoo ka eegaya arrimaha anshaxa, daaficidda da yarta ama markhaatiyaasha, fayodhowrka ama ammaanka guud. 6. Xukun-dacwadeed lama ridi karo iyadoo aan dhinacyada is haya oo dhammi fursad u helin inay gartooda jeedsadaan, haddii aan sharcigu si kale u tilmamin. 7. Qofna ma burin karo, ma bedeli karo, ma diidi karo in uu u hogaansamo xukun maxkamadeed, haddii aysan xukunkaas bedelin ama tirtirin Maxkamad ka sarreysa. 8. Maxkamaddu waa in ay u fasirtaa eedaysanaha dambiga lagu soo eedeeyey.
Bogga 39 9. Garsoorka Puntland wuxuu aqoonsan yahay Suluxa, dhex-dhexaadinta iyo heshiisyada bulshada dhexdeeda oo xeerka ku dhisan. XUBINTA LABAAD MAXKAMADAHA Qodobka 90aad MAXKAMADDA SARE 1. Maxkamadda Sare waxay ku shaqaysaa goaan wadareed, waxayna ka kooban tahay shan (5) xubnood oo kala ah: Guddoomiye, Guddoomiye Ku-Xigeen, iyo saddex (3) garsoore. 2. Maxkamadda Sare waxay yeelanaysaa laba (2) garsoore oo kayd ah oo uu Guddoomiyaha Maxkamaddu u yeeri karo in uu dacwadda la galo, marka garsoorayaasha qaarkood fasax galaan ama garsoore si gaar ah uga cudurdaarto inuu wax ka galo qaadista dacwadaha qaarkood. Garsoorayaasha kaydka ahi waa inay buuxiyaan isla shuruudaha Garsoorayaasha rasmiga ah, lana mariyo habka kuwa kale lagu doortay. 3. Muddada xilhaynta xubnaha Maxmadda Sare ee rasmiga ah iyo kuwa kaydka ahba waa shan (5) sano, marka laga reebo doorashada koowaad oo noqonaysa sida soo socota: b. Saddex garsoore oo rasmi ah iyo mid kayd ah waxaa la dooranayaa (5) shan sano doorashada ugu horraysa. t. Labo garsoore oo rasmi ah iyo mid kayd ahna waxaa la dooranayaa afar (4) sano doorashada ugu horraysa. j. Wixii ka dambeeya doorashada koowaad koox walba oo muddadoodu dhammaato, waxaa dib loo dooranayaa garsoorayaashii hore ama kuwa kale muddo shan (5) sano ah. 4. Xarunta Maxkamadda Sare waa xarunta Dawladda Puntland, hase ahaatee dacwadaha waxay ku qaadi kartaa meel kasta oo dalka ka mid ah. 5. Garsoorayaasha Maxkamadda Sare waxaa xilka lagaga qaadi karaa aqlabiyad haldheeri (1/2+1) ah xubnaha Golaha Wakiillada, iyadoo loo cuskanayo qodobka 98aad ee Dastuurka.
Qodobka 91aad DOORASHADA GARSOORE MAXKAMADDA SARE Qofka noqonaya Garsoore Maxkamadda Sare waxaa looga baahan yahay: b. Inuu yahay muwaadin Puntland Muslim ah, gutana waajibaadka diiniga ah t. In aan xuquuqdiisa maxkamadi laalin shantii (5) sano ee ugu dambeysay. j. In aan dadiisu ka yarayn (40) afartan sano x. In uu haysto shahaado culuunta sharciga oo uu ka qaatay Jaamacad la aqoonsan yahay. Kh. Inuu leeyahay waaya-aragnimo garsoor oo aan ka yarayn Shan (5) sano ama qareennimo lix (6) sano aan ka yareyn. d. Inuu yahay qof lagu yaqaan hufnaan iyo daacadnimo, aqoon iyo kartina u leh arrimaha sharciga. Qodobka 92aad NIDAAMKA GOAAN QAADASHADA MAXKAMADDA SARE 1. Goannada Maxkamadda Sare waxay ku ansaxaan aqlabiyadda Xubnaha Maxkamadda. Garsooraha ama Garsoorayaasha aan ogoleyn goaanka la gaaray, waxay muujisan karaan codkooda diidmada ah. 2. Kaaliyaha Maxkamadda Sare waa inuu la socodsiiyaa goaannada maxkamadda dhinacyada ay khusayso. Qodobka 93aad AWOODAHA IYO XILALKA MAXKAMADDA SARE 1. Maxkamadda Sare waa darajada ugu sarraysa maxkamadaha, waxayna leedahay awood ku baahsan Puntland oo dhan. 2. Waxay horgeysaa Guddiga sare ee maamulka garsoorka mashruuc sharci ama wax ka beddelid shuruuc jirtay oo la xiriira maamulka Garsoorka. 3. Waxay xallisaa khilaafaadka u dhaxeeya Maxkamadaha, kuna saabsan xuduudahooda.
Bogga 41 4. Waxay go,aan kama dambays ah ka gaartaa dacwadaha ay xukumeen maxkamadaha ka hooseeya 5. Waxay xallisaa ismaandhaafyada sharciyeed oo ayan masuuliyiin kale sharciyan ugu xilsaarneen. 6. Waxay diyaarisaa habraacyada dacwadaha ka dhacaya dalka dibaddiisa iyo inay ogolaato habraaca lagu fulinayo dacwad ama xarig dembiile dal kale lagaga soo xukumay. 7. Waxay goaan ka gaartaa dhammaan codsiyada isu-gacan gelinta dembiilayaasha. 8. Waxay hubisaa sida ay maxkamadaha hoose u maamulayaan garsoorka. 9. Waxay Goaan ka gaartaa Saraakiisha sar-sare ee Dawladda marka la soo eedeeyo . 10. Awoodaha iyo xilalka Maxkamadda Sare waxaa ka mid ah kuwa xeerarka kale ee Puntland u banneynayo. 11. Maxkamada sare waxay ku dhawaaqdaa natiijada kama dambasyta ah ee doorashooyinka dalka Qodobka 94aad MAXKAMADDA DASTUURIGA 1. Dawladda Puntland waxay yeelaneysaa Maxkamad Dastuuriga ah, garsoorayaasheeduna waxa ay ka koobnaanayaan garsoorayaasha Maxkamadda Sare oo lagu kordhiyo afar (4) garsoore oo bulshada laga soo dhex xulay.
2. Afarta garsoore ee ka baxsan xubnaha maxkamada sare waxaa la magacaabayaa 30 beri gudahood marka Golaha Wakiilladu ansixiyo xeerka dhismaha Maxkamadda Dastuuriga ah. 3. Afarta garsoore ee bulshada laga soo xulayo, labo ka mid ah waxaa dooranaya Golaha Wakiillada, labada kalena waxaa soo xulaya Golaha Xukuumadda waxaana ansixinaya Golaha Wakiillada. 4. Afarta xubnood ee Maxkamadda Dastuuriga ah ee laga soo xulay bulshada waxay dhammaan xuquuqda kala mid yihiin garsoorayaasha Maxkamadda Sare.
Bogga 42 5. Guddoomiyaha Maxkamadda sare ayaa noqonaya Guddoomiyaha Maxkamadda Dastuuriga ah. 6. Maxkamaddu waxa ay u hoggaansamaysaa sharciga oo keli ah, maammul ahaan iyo garsoor ahaanba. 7. Kaaliyaha Maxkamadda Sare ayaa noqonaya Xoghayaha Maxkamadda Dastuuriga ah. 8. Haddii jago-garsoore ama ka badani ka bannaanaato Maxkamadda Dastuuriga, sabab kasta ha ku timaadee, waa in lagu buuxiyaa afartan iyo shan (45) maalmood gudahood. 9. Xarunta Maxkamadda Dastuuriga waa caasimadda Puntland. 10. Xukuumadda ayaa diyaarineysa xeer gaar ah oo lagu qeexayo dhismaha, habka iyo awoodaha Maxkamadda Dastuuriga, waxaana ansaxinaya Golaha Wakiillada.dhismaheeda ka hor. Qodobka 95aad AWOODAHA IYO XILALKA MAXKAMADDA DASTUURIGA 1. Maxkamadda Dastuuriga ah waxay awood u leedahay in ay buriso xeer, xeerhoosaad, wareegto iyo amar maamul gebi ahaan ama qayb ahaan, sababo la xiriira inuu Dastuurka khilaafsan yahay. 2. Goaan ka gaarista cabasho muwaadin oo la xiriirta tacaddi loo geystey xuquuqdiisa dastuuriga ah. 3. Maxkamadda Dastuuriga ahi waxay goannadeeda waafajisaa Shareecada Islaamka, Dastuurka iyo Xeerarka kale. 4. Maxkamadda Dastuuriga waa in ay ku xalisaa khilaafaadka u dhexeeya hayadaha dawliga ah sida hadba awoodahooda dastuuriga iyo xilalkoodu kala yihiin. 5. Maxkamadda Dastuuriga ah waxay ka siisaa talo sharci, markii uu Golaha Wakiillada weydiisto, sida mashruuc sharci ah oo ay ka doodayaan u waafaqsan yahay Dastuurka. 6. Xeer gaar ah ayaana qeexaya sida Maxkamadda Dastuuriga ay u gudanayso xilkaas.
Bogga 43 Qodobka 96aad GOAAN QAADASHADA MAXKAMADDA DASTUURIGA 1. Maxkamadda Dastuuriga waxay goaannadeedu ku gaartaa aqlabiyad cod hal-dheeri ah. 2. Goaannada Maxkamadda Dastuuriga ah waa in la Diiwaangeliyo, Dadweynaha lala socodsiiyo, laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee Dawladda. 3. Xoghayaha Maxkamaddu waa inuu goaannada Maxkamadda ogeysiiyaa dhinacyada ay khusayso. Qodobka 97aad SHURUUDAHA XULIDDA GARSOORAYAASHA MAXKAMADDA DASTUURIGA Garsoorayaasha Maxkamadda Dastuuriga ah ee aan ka tirsanyn Maxkamadda sare waa inay buuxiyaan shuruudaha ku xusan qodobka 91aad ee Dastuurka. Qodobka 98aad LUMINTA XUBINNIMADA MAXKAMADDA DASTUURIGA Xubinnimada Maxkamadda Dastuuriga waxaa lagu waayi karaa marka ay sugnaato mid ka mid ah sababaha hoos ku qoran: b. Haddii ay lumiso shuruudihii lagu soo doortay mid ka mid ah. t. Geeriyooto ama ay ku dhacdo jirro ay la gudan waydo xilkeeda. j. Istiqaalo keento lagana aqbalo. x. Ku xad gudubto Shareecda Islaamka, Dastuurka iyo qawaaniinta Dalka. Kh. Maxkamadi ku xukunto fal dambiyeed culus. Qodobka 99aad MAXKAMADAHA RAFCAANKA 1. Xarumaha Maxkamadaha Rafcaanku waa magaalo-madaxyada Gobollada.
Bogga 44 2. Maxkamadaha Rafcaanku waxa ay qaadaan dacwadaha rafcaanka laga soo qaatay ee xukunnadoodu ka soo dhamaadeen maxkamadaha derejada koowaad. 3. Awoodaha maxkamadda rafcaanku waxa ay ku egtahay gobolkeeda. 4. Maxkamad kasta ee Rafcaan waa in ay yeelataa ugu yaraan saddex (3) garsoore. 5. Shuruudaha laga doonayo garsoorayaasha loo qaadanayo Maxkamadda Rafcaanka waxa ay la mid yihiin kuwa Garsoorayaasha Maxkamadda Sare, sida ku cad qodobka 91aad ee Dastuurka. Garsoorayaashaasi waa in ay haystaan shahaado qaanuun ee la aqoonsan yahay ama in ay aqoon ballaaran u leeyihiin Shareecada Islaamka. Qodobka 100aad MAXKAMADAHA DEREJADA KOOWAAD 1. Maxkamadaha derejada koowaad waa maxkamadaha ay ka bilowdaan dacwaduhu nooc kasta ha ahaadeene, marka laga reebo dacwadaha maamulka oo ka bilowda maxkamadda sare iyo kuwa dastuurku si kale u xeeriyo. 2. Tirada Garsoorayaasha Maxkamadaha derejada koowaad waxaa qeexaya Xeerka Nidaamka Garsoorka. QODOBKA 101aad GUDDIGA SARE EE MAAMULKA GARSOORKA 1. Guddiga sare ee Garsoorku waa kan ugu sareeya Maamulka Garsoorka iyo ilaalinta Madaxbannaanidiisa. 2. Guddiga sare ee maamulka Garsoorku wuxuu ka kooban yahay: b. Guddoomiyaha Maxkamada Sare oo noqonaya Guddoomiyaha Guddiga sare ee Garsoorka. t. Xeer-Ilaaliyaha Guud j. Saddex garsoore oo ka tirsan maxkamada sare. x. Labo garyaqaan oo laga soo xulay dadweynaha oo ay soo xusho xukuumadu, Golaha Wakiilladuna ogolaado. 3. Marka Guddoomiyaha Maxkamada sare gudan kari waayo xilka guddoominta Guddiga, sabab kasta ha ku timaadee, waxaa si ku meel gaar ah xilkii Guddoomiyanimadu ugu wareegayaa Garsoore ka tirsan Maxkamada sare oo darajo ahaan ku xiga Guddoomiyaha maxkamada sare.
Bogga 45 4. Guddiga sare ee Maamulka garsoorka waxaa hawlihiisa nidaaminaya sharci gaar ah. QODOBKA 102aad AWOODAHA IYO XILALKA GUDDIGA SARE EE MAMULKA GARSOORKA Goluhu wuxuu yeelanayaa awoodaha iyo xilalka soo socda: b. Magacaabida, ruqsaynta, bedelidda, dalacsiinta, anshaxmarinta garsoorayaasha maxkamadaha rafcaanka iyo derajada koowaad iyo dhammaan shaqaalaha kale ee Hayadda Garsoorka. t. Diyaarinta hal-beegyada sharci ee la xiriira taxanaha shaqo ee dhinaca maamulka, hawl wadeennada garsoorka iyo u gudbinta halbeegyadaas Wasiirka Caddaaladda si uu uga ansixiyo Golaha xukuumada j. Samaynta iyo maamulidda xarumo tababarro garsoor si loo horumariyo heerka aqoonta iyo xirfadda garsoorayaasha iyo kaaliyeyaashooda, iyadoo lala kaashanayo Wasaaradda Cadaaladda. x. Shuruudaha uu Golaha Garsoorka u adeegsanayo shaqaalaynta garsoorayaasha iyo shaqaalaha kale waxaa lagu qeexayaa sharci gaar ah. Kh. Goaamada Guddiga Sare ee Maamulka Garsoorka ee ku saabsan Magacaabidda, Ruqsaynta iyo Dalacsiinta Garsoorayaasha Maxkamadaha Rafcaanka, Maxkamaddaha Derejada Koowaad iyo Ku-xigeennada Xeer-ilaaliyaha Guud, waxay ku soo baxayaan Dekreeto Madaxweyne Xubinta 3aad XEER-ILAALINTA GUUD Qodobka 103aad XEER-ILAALINTA GUUD 1. Xafiiska Xeer-Ilaalinta Guud waa qayb ka mid ah Garsoorka Puntland. 2. Xafiiska Xeer-Ilaalintu wuxuu u hogaansanyahay sharciga oo kali ah 3. Xarunta Xeer-Ilaalinta Guud waa caasimada Puntland 4. Awoodda Xeer-Ilaalinta Guud waxay ku fidsan tahay Dalka Puntland oo dhan 5. Xeer-Ilaalinta Guud wuxuu ka kooban yahay: b. Xeer-Ilaaliyaha Guud t. Ku-Xigeenka Xeer-Ilaaliyaha Guud.
Bogga 46 j. Xeer-ilaaliyayaasha Gobollada 6. Xeer-Ilaaliyayaasha Gobolladu waxay la mid yihiin xagga mansabka Garsoorayaasha Maxkamadaha Rafcaanka, waxaana magacaabidooda iyo xil ka qaadistooda awood u leh Guddiga sare ee Maamulka Garsoorka. 7. Xeer-Ilaaliyayaasha Gobolladu waxay leeyihiin xuquuq iyo xasaanad la mid ah tan Garsoorayaasha Maxkamadaha. Qodobka 104aad SHURUUDAHA IYO MAGACAABIDDA XEER-ILAALIYAHA GUUD IYO KU XIGEENKIISA 1. Golaha Xukuumada ayaa soo jeedinaya magacaabidda Xeer-Ilaaliyaha Guud iyo ku xigeenkiisa waxayana horgeynayaan Golaha Wakiillada si uu u ansixiyo. 2. Qofka loo magacaabayo Xeer-Ilaaliye Guud ama ku xigeenkiisu waa inuu buuxiyo shuruudaha soo socda: b. Inuu yahay muwaaddin Puntland Muslim ah, gutana waajibaadka diiniga ah. t. In ayan dadiisu ka yarayan 40 sano. j. Inuu haysto shahaado Jaamacadeed ee culuunta sharciga, isla markaasna uu leeyahay waaya-aragnimo Garsoore oo aan ka yaryan shan sano( 5) ama mid Qareenimo oo aan ka yarayn lix (6) sano. x. Waa inuu leeyahay dhaqan wanagsan iyo karti xil-gudasho oo hawshiisa la xiriirta. Qodobka 105aad AWOODAHA IYO XILALKA XEER-ILAALIYAHA GUUD 1. Xeer-Ilaaliyaha Guud wuxuu awood u leeyahay in uu dacwad ku soo oogo kuna mudaco saraakiisha sare ee Dawladda Maxkamadda horteeda. 2. Xafiiska xeer-ilaaliyaha Guud wuxuu u xilsaaran yahay: b. Ilaalinta ku dhaqanka sharciyada iyo ka hortaga dhaqan xumada Dalka Puntland. t. Baarista, oogidda iyo ku muddaca dembiilayaasha Maxkamadaha hortooda. j. Kormeerida xabsiyada iyo xarumaha dhaqan celinta.
Bogga 47 x. ilaalinta iyo difaaca xuquuqda agoonta, Dadka dhimirkoodu dhiman yahay iyo cid kasta oo u baahan daryeel sharci gudashada xilalka iyo waajibaadka ay siiyaan sharciyada gaarka ah Qodobka 106-aad AWOODAHA IYO XILALKA KU XIGEENKA XEER-ILAALIYAHA GUUD 1. Ku Xigeenka Xeer-Ilaaliyha Guud waxaa uu qabanayaa dhammaan xilalka XeerIlaaliyaha Guud, marka uu maqan yahay ama uusan si ku meel gaar ah xilka u gudan karin. 2. Ku-Xigeenka Xeer-Ilaaliyaha guud wuxuu kala taliyaa Xeer-Ilaaliyaha Guud hawlaha Xeer-Ilaalinta. 3. Ku-Xigeenka Xeer-Ilaaliyaha Guud wuxuu fuliyaa hawlaha uu u cayimo XeerIlaaliyaha Guud oo aan ka baxsanayn masuuliyadda Xeer-Ilaaliyaha Guud. Qodobka 107aad XIL KA QAADISTA XEER-ILAALIYAHA GUUD IYO KU XIGEENKIISA. 1. Waxaa Xeer-Ilaaliya Guud xilka looga qaadi karaa si sharci ah oo keliya. 2. Haddii lagu qabto isagoo faraha kula jira dembi culus ama ay maxkamadi ku rido xukun kama danbays ah. 3. Arrimaha labada faqradood ee kor xusan markay dhacaan waxaa xilka qaadida soo jeedinaya Golaha Xukuumada una gudbinaya Golaha Wakiillada si ay u ogolaadaan qabashada iyo dacwad ku qaadista Xeer-Ilaaliyaha Guud. Qodobka 108aad AQOONSIGA XEER-DHAQAMEEDKA 1. Dastuurku wuxuu Aqoonsan yahay Xeer-Dhaqameedka aan ka horimaanayn Shareecada Islaamka, Dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka. 2. Isimada la aqoonsan yahay waa heerka ugu sarreeya hoggaamiye dhaqameedka.
Bogga 48 3. Si loo ilaaliyo sharafta iyo dhex-dhexaadnimada hogaamiye dhaqameedyada, waxaa reebban in ay ka qayb qaataan ururo iyo xisbiyo siyaasadeed. 4. Wixii muran iyo ismaandhaaf ah oo ka dhex dhaca beelaha, khatarna galin kara nabadgalyada beelaha, hogaamiye dhaqameedyada waxaa loogu yeerayaa in ay talo ka soo jeediyaan ama ay u helaan xal nabadeed. 5. Goaannada dib-u-heshiisiinta, dhexdhexaadinta, iyo heshiisyada xallinta khilaafaadka ay guddoomiyaan hoggaamiye dhaqameedyadu, iyaga oo adeegsanaya xeerarka habdhaqameedka, dhamman hayadaha Dawladda waa inay aqoonsadaan gacanna ku siiyaan fulinta goaannada ay gaaraan. 6. Marka hoggaamiye dhaqameedyadu gaaraan goaan ku saabsan xallinta khilaafaadka beelaha dhexdooda, waa in laga diiwaan geliyaa maxkamadda derejada koowaad ee degmada dhibaatadu ka dhacday, maxkamadduna waa inay la socotaa fulinta goaankaa. Qaybta 5aad HEYADAHA MADAXABANAAN EE DAWLLADDA Xubinta koowaad HANTIDHAWRKA GUUD Qodobka 109aad XAFIISKA HANTIDHAWRKA GUUD 1. Xafiiska Hantidhawrka Guud waa hayad madaxbannaan wuxuuna u hoggaansamaa sharciga oo keliya. 2. Xarunta Hantidhawrka Guud waa Caasimadda Puntland, wuxuuna leeyahay awood ku baahsan Puntland oo dhan. 3. Madaxa xafiiska Hanti-dhowrka Guud waxaa magacaabaya Golaha Xukuumadda, waxaana xilka lagaga qaadi karaa sababo Xeerka ku cad oo keliya. Magacaabistiisa iyo xilka qaadistiisaba Golaha Wakiillada ayaa oggolaanaya. 4. Qofka noqonaya Madaxa Xafiiska Hantidhawrka Guud waa inuu yahay muwaaddin Puntland ah oo aynan dadiisu ka yarayn afartan sano (40), haystana Shahaado Jaamacadeed, isla markaasna aqoon u leh xisaabaadka Dawladda iyo guud ahaanba xisaabaadka, waana inay u weheliso waaya-aragnimo la xiriirta isla hawshaas oo aan ka yarayn shan (5) sano.
Bogga 49 Marka laga reebo Madaxa Xafiiska Hantidhawrka Guud dhammaan shaqaalaha kale ee xafiiska waxaa lagu qaadanayaa si waafaqsan sharciga shaqaalaha Dawladda ee Puntland. Qaab-dhismeedka iyo habraacyada Xafiiska Hantidhawrka Guud Sharci gaar ah ayaa qeexaya. Qodobka 110aad
AWOODAHA IYO XILALKA HANTI DHAWRKA GUUD
Awoodaha iyo xilka Hantidhawrka Guud: b. La Dagaallanka musuqmaasuqa heer kasta oo maamulka Dawladda dhexdeeda ka jira. t. Hubinta in dhammaan kharashyada xisaabaadka dawladda ee ay galaan dhammaan hayadaha dawladdu ay ku baxaan si sharci ah oo waafaqsan miisaaniyadda Dawladda. j. Dabagalka munaasibnimada waxqabadyada Dawladda ee kallifa kharash bixin ka soo jeedda xisaabaadka Dawladda. x. Baaritaanka hayadaha Dawladda, dawaladaha hoose, wakaaladaha Madaxa-bannaan, shirkadaha wadaagga ah ee dawladdu qayb ka tahay iyo meel kasta oo lagu maamulo hanti dawladeed, si waafaqsan habraacyada shuruucdaa maaliyadeed iyo xisaabaadka Dawladda. kh. Goaan ka gaaridda masuul kasta oo si khaldan u maamula maaliyad dawladeed iyo goaaminta ganaax u dhigma heerka takrifalka masuulkaasi galay. Haddii baaritaanka uu ka soo baxo fal-dambiyeed, Hantidhawrka Guud wuxuu kiiskaas oo ay la socdaan qoraallada ka marag kacaya u gudbinayaa Xeer-Ilaalinta Guud si dacwad loogu oogo. d. Inuu hayad walba oo dawladeed weydiisto ama kala wareego dokumentiyada uu u baahan yahay marka uu baaritaan ku samaynayo inay jirto xatooyo ama ku takrifal hanti dadweyne si uu uga baaraandego. r. Inuu sannad walba u gudbiyo Golaha Wakiillada warbixin ku aadan xisaab-xirka miisaaniyadda Dawladda ee sanadkii la soo dhaafay. s. Xafiiska Hantidhawrka Guud wuxuu awood u leeyahay soo saaridda awaamir iyo habraacyo ku aaddan gudashada xilalka hantidhawrka guud.
Bogga 50 sh. Gudashada awoodaha iyo xilalka kale ee ay faraan sharciyada Puntland. Xubinta Labaad Qodobka 111aad BANKIGA DHEXE 1. Bankiga Dhexe waa hayad Dawladeed oo Madaxbannaan, wuxuuna u xilsaaran yahay: b. Hirgelinta siyaasadda lacageed ee Dawladda t. Daabicidda lacagta. j. keydinta lacagaha iyo qiimaleyda kale. x. Oggolaanshaha shirkadaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay. kh. Kormeeridda shirkadaha maaliyadeed ee gaarka ah iyo kuwa guud ee Puntland ka hawlgala. 2. Bankiga Dhexe waxaa hawlihiisa haga Guddi Maamul oo ka kooban toddoba (7) xubnood oo kala ah: b. Guddoomiyaha Bankiga Dhexe. t. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda. j. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Ganacsiga. x. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha. Kh. Saddex xubnood oo ay magacawdo Rugta Ganacsiga. d.Xoghaye aan cod lahayn oo noqonaya Agaasimaha Guud ee Bankiga Dhexe. 3 Guddoomiyaha Bankiga Dhexe waxaa xilka u magacaaba Xukuumadda, iyada ayaana sababaha sharcigu tilmaamayo oo kaliya ku ruqseyn karta, Golaha Wakiillada ayaa ansixiya magacaabistiisa iyo ruqseyntiisaba. 4. Qaab-dhismeedka iyo nidaamka uu ku hawl-galo Bankiga Dhexe, waxaa qeexaya xeer gaar ah oo Golaha Wakiilladu ansixiyo.
Xubinta Saddexaad HAYADDA DOORASHADA Qodobka 112aad GUDDIGA DOORASHADA 1. Guddiga Doorashada Puntland waa hayad madaxbannaan, waxayna u hogaansamaysaa sharciga oo keliya, waxayna xilkeeda u gudaneysaa si waafaqsan xeerarka & Qawaaniinta Doorashada.
2. Waa hayadda ugu sarraysa arrimaha doorashooyinka ee dalka oo goaannadeedu aysan burin karin hayad kaloo dawli ah, marka laga reebo Maxkamadda Dastuuriga ah. 3. Guddiga Doorashada ee Puntland wuxuu ka kooban yahay sagaal (9) xubnood oo la dooranayo muddo lix (6) sano ah, dibna loo soo dooran karo. 4. Marka ay bannaanaato xubin/xubno Guddiga ka mid ah sababo sharci ah awgood xubinta ama xubnaha beddelayaa waxay xilka haynayaan mudadda ka harsan xilhayntooda. Qodobka 113aad NIDAAMKA DOORASHADA GUDDIGA 1. Guddoomiyaha Golaha Wakiillada ayaa saddex bilood ka hor ku dhawaaqaya wakhtiga loo muddeeyay ansaxinta Xubnaha Guddiga Doorashada, waxaana loo soo kala magacaabayaa, sida soo socota: b.Saddexda Xisbi mid waliba hal (1) xubin ayuu soo magacaabayaa. t.Madaxweynaha wuxuu magacaabayaa saddex (3) xubnood. j. Golaha Wakiilladu wuxuu magacaabayaa saddex (3) xubnood. x. Golaha Wakiillada wuxuu ansaxinayaa xubnaha ay soo kala magacaabeen Madaxweynaha, Golaha Wakillada iyo Xisbiyada. Haddii xubin ka mid ahi Goluhu ansaxin waayo, wuxuu Guddoomiyha Golaha Wakiillada u qorayaa in ciddii soo magacowday ay ku soo badasho mudoo shan iyo toban (15) beri gudahood. Xubintii muddadaas lagu soo magacaabi waayo halkeedii waa ay bannanaanaysaa ilaa laga soo magacaabayo.
Bogga 52 Habka waayista ama xil-ka-qaadista xubinta Guddiga Doorashada wuxuu la mid yahay kan xubinta Maxkamadda Dastuurka, sida ku cad qodobka 101aad. Qodobka 114aad AWOODAHA IYO XILALKA GUDDIGA DOORASHADA
1. Guddiga Doorashada Puntland wuxuu leeyahay awoodaha iyo xilalka soo socda: b. Fulinta iyo maamulidda aftida iyo habka doorashada sida Dastuurkani qabo. t. Ku dhaqmidda awoodaha arrimaha doorashada, xallinta khilaafaadka, goaaminta xuquuqda iyo Ganaaxa qof kasta oo ku xadgudba xeerka doorashada. j. U oggolaanshaha xisbiyada siyaasadda, kormeeridda sharcinnimada hawlgalladooda iyo goaan ka gaaridda is-qabadyada xisbiyada dhexdooda ah, markii qof ama koox xisbi ka mid ahi ay codsadaan in guddigu soo faragaliyo arrimaha xisbi dhexdiisa ka taagan. x. Maamulidda qaababka lagama maarmaanka u ah gudashada xilalka Guddiga Doorashada iyo habraacyada hirgelinta doorashooyinka. Kh. ku dhawaaqidda natiijada aftida ama doorashooyinka iyo inay siiyaan aqoonsi muwaaddinka la doorto. 2. .Xeer gaar ah ayaa nidaaminaya howlaha iyo waajibaadka Guddiga doorashada. Qodobka 115aad WADA SHAQAYNTA GUDDIGA DOORASHADA IYO XISBIYADA SIYAASADEED 1. Dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee ka qaybgelaya tartanka doorashooyinka waxay xaq u leeyihiin inay la socdaan, isla markaana ay kormeeraan dhammaan tallaabooyinka habka doorashooyinka. Sharciga ayaa qeexi doona qaabka iyo xadka ka qaybgalka xisbiyada ee arrintaas. 2. Xisbiyada siyaasaddu waxay xaq u leeyihiin inay goob joogayaal ka ahaadaan dhammaan laamaha Guddiga Doorashada ee heer qaran, gobol, degmo iyo goobaha cod bixinta. Sidoo kale xisbiyadu waa inay goob joog ka ahaadaan soo xeraynta sanduuqyada codbixinta iyo tirinta codadka. 3. Guddiga Doorashada Puntland waa inuu hubiyo inaan shakhsiyaad isku siyaasad ahi yeelan aqlabiyadda gacan ku haynta maamulidda hawlaha doorashooyinka.
Bogga 53 4. Sharciga ayaa nidaaminaya qaabka ololaha axsaabta iyo musharixiinta, waana in uu sameeyaa xadiga tabarrucaadka la siin karo iyo tirada lacagta lagu kharashgareenayo doorashada. 5. Dhammaan Xisbiyada siyasadda ee doorashooyinka ka qaybgelaya waa inay fursad siman u leeyihiin warbaahinta Dawladda marka lagu jiro ololayaasha doorashooyinka. 6. Guddiga Doorashooyinka Puntland ayaa u xilsaaran hubinta dhaqangelidda wada shaqaynta ku tilmaaman faqradaha qodobkan. 7. Inta laga gaarayo aburitaanka Guddiga Doorashada Puntland ee rasmiga ah, waxaa jiraya Guddiga Doorashada Puntland ee ku meelgaarka oo ka kooobnaanaya 9 xubnood sida ku cad lifaaqa 1aad ee Dastuurkan. Xubinta Afaraad DIFAACAHA XUQUUQDA AADANAHA Qodobka 116aad XAFIISKA DIFAACAHA IYO TAABBAGELINTA XUQUUQDA AADANAHA 1. Xafiiska Difaacaha iyo Taabbagelinta xuquuqda aadanuhu wuxuu ka kooban yahay: Difaacaha Xuquuqda Aadanaha. j. Wakiillada gobollada ee Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha. x. Hawlwadeennada Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha. 2. Xarunta Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanahu waa caasimadda Puntland. 3. Difaacaha Xuquuqda Aadanuhu wuxuu leeyahay awood xilgudasho oo heer Puntland ah. Qodobka 117aad MAGACAABIDDA DIFAACAHA 1. Golaha Xukuumadda ayaa soo gudbinaya liiska musharaxiinta u tartamaya jagada difaacaha Xuquuqda Aadanaha, Golaha Wakiilladuna waxay ku dooranayaan habka Doorashada Golaha Wakiillada.. 2. Qofka loo dooranayo Difaacaha Xuquuqda Aadanaha waa inuu buuxiyo shurrudaha soo socda:
Bogga 54 b. Waa inuu yahay Muslim ahna muwaadin Puntland ah. t. Waa inayn dadiisu ka yarayan afartan (40) sano. j. Waa inuu leeyahay aqoon iyo waayo-aragnimo la xiriirta Xuquuqda Aadanaha. x. Waa inuu leeyahay anshax wanaagsan, dhowrsoonaan iyo karti xil-gudasho. 3. Muddada xilhaynta Difaacaha Xuquuqda Aadanahu waa shan sano dibna waa loo soo dooran karaa. Qodobka 118aad AWOODAHA IYO XILALKA DIFAACAHA XUQUUQDA AADANAHA Awoodaha iyo xilalka Difaacaha Xuquuqda Aadanuhu waa: 1. Ka hortegidda xadgudubyada Xuquuqda Aadanaha, isagoo talabixin siinaya hayadaha waddaniga oo ay arrintu khuseyso. 2. Ku wacyi galinta dadweynaha iyo masuuliyiinta dawladda muhimadda ay leedahay dhowrista Xuquuqda Aadanaha ee ku cad Dastuurka iyo sharciyada Puntland, isla markaasna ku xusan Axdiyada iyo heshiisyada caalamiga ah. 3. Inuu daafaco xuquuqda aadanaha ee Dastuurka iyo shuruucda kale ay qeexayaan. 4. Inuu baaro cabashooyinka ay muwadiniinta ama ururada Bulshada ka sheeganayaan xuquuqdooda biniaadanimo, uuna gaarsiiyo hayadaha dawliga ah iyo kuwa wadaniga ah natiijada baaristiisa, isagoo raacinaya talo soo jeedintiisa la xiriirta damanaad qaadka xuquuqda aadanaha. 5. Inuu taageero dadka lagu sameeyo xadgudubyada Xuquuqda Aadanaha ka dhanka ah uuna ka difaaco maxkamadda horteeda ama si guud. 6. Magacaabidda guddiyo gaar ah oo gacan ka siiya gudashada xilkiisa. 7. Kormeeridda goob kasta oo lagu sameeyo ama la tuhunsan yahay in lagu gabood-falo Xuquuqda Aadanaha. 8. U ololaynta dib u habeynta sharciyada iyo hab-dhaqanka maamulka si kor loogu qaado dhawrista iyo qaddarinta Xuquuqda Aadanaha. 9. Soo saarista warbixin sanadeed la xiriirta xaaladda Xuquuqda Aadanaha ee Puntland.
Bogga 55 10. U bandhigidda Golaha Xukuumadda talooyinka ku aaddan mashruuc sharci oo khuseeya Xuquuqda Aadanaha. 11. Gudashada xilalka kale ee sharciyada Puntland siiyaan xafiiskaas. Qodobka 119aad XIL KA QAADISTA DIFAACAHA XUQUUQDA AADANAHA Difaacaha Xuquuqda Aadanaha waxaa xilka lagaga qaadi karaa codbixin saddex meelood labo (2/3) xubnaha Golaha Wakiillada marka ay sugnaato mid ka mid ah sababaha ku cad qodobka 98-aad ee Dastuurka. Qaybta 6aad MAAMULKA GOBOLLADA IYO DEGMOOYINKA Xubinta Koowaad BAAHINTA MAAMULKA Qodobka 120aad BAAHINTA MAAMULKA GOBOLLADA IYO DEGMOOYINKA 1. Puntland waxay ku dhaqmaysaa hannaanka mabaadiida baahinta maamulka. 2. Si loo hirgeliyo baahinta maamulka Dawladda, dalku wuxuu u qaybsan yahay gobollo iyo degmooyin. 3. Xukuumadda ayaa masuul ka ah dib-u-habeynta iyo kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka. 4. Nidaamka baahinta xukunka waxaa lagu qeexayaa sharci gaar ah oo Golaha Wakiilladu meelmariyo. 5. Kala xadaynta awoodaha maamul iyo cashuureed ee Dowladda Dhexe, Gobollada iyo Degmooyinka waxaa lagu qeexayaa xeer gaar ah.
Bogga 56 Xubinta 2aad MAAMULKA GOBOLLADA Qodobka 121aad AWOODAHA IYO XILALKA GUDDOOMIYAHA GOBOLKA 1. Xukumaddu waxa ay gobol kasta u magacaabeysaa Guddoomiye Gobol & Guddoomiye ku xigeenno. 2. Awoodaha iyo Xilalka Gudoomiyaha Gobolka waxa ay yihiin: b. Waa madaxa u sareeya laamaha Dowladda ee Gobolka, wuxuuna guddoomiyaa shirarka guddiyada horumarinta iyo nabadgalyada ee gobolka. t. Wuxuu kormeeraa adeegyada iyo hawlgallada Xukuumadda ee gobolkiisa. j. Wuxuu guddoomiyaa kulannada ay isugu yimaadaan guddiyada joogtada ah ee Golayaasha Degmooyinka. x. Guddoomiyaha Gobolku waa isku-xiraha Maamulka Dhexe ee Puntland iyo maamulada degmooyinka ee gobolkiisa. Qodobka 122aad SHURUUDAHA MAGACAABISTA GUDDOOMIYE GOBOL & GUDDOMIYE KU XIGEEN. Qofka noqonaya Guddoomiye Gobol waa inuu buuxiyo shuruudaha soo socda: b. Waa inuu yahay muwaaddin Puntland Muslim ah, gutana waajibaadka diiniga ah. t. Waa in aan dadiisu ka yarayn soddon (30) sano. j. Waa in aan xuquuqdiisa muwaaddinnimo la laalin shantii (5) sano ee ugu dambeysay. x. Waa in uu leeyahay aqoon sare iyo waayo-aragnimo maamul. kh. Waa inuu xoogagaal u yahay duruufaha iyo dhibaatooyinka Gobolka.
Bogga 57 Xubinta Saddexaad MAAMULKA DEGMOOYINKA Qodobka 123aad GOLAYAASHA DEGAANKA 1. Gobol waliba maamul ahaan wuxuu u qaybsamayaa degmooyin. Sharci u gaar ah ayaa goynaya tirada, magacyada iyo xuduudaha degmooyinka, derejooyinka ay kala yeelanayaan oo ku xirnaanaysa tirada dadka ku nool iyo baaxadda degmo kasta. 2. Degmo kastaa waxay yeelaneysaa madaxbannaani dhaqaale iyo maamul, waxaana u maamulaya Gole Degaan. Sharciga ayaa dejinaya mabaadiida guud ee saldhigga u noqonaysa hab-maamuleedka degmada, xil-gudashada iyo adeegsashada awoodaha ay degmadu u madaxbannaan tahay. Tirada xubnaha Golaha Deegaanka degma kasta waxay ku xirnaanaysaa tirada dadka ku nool iyo baaxadeeda dhuleed. 3. Golayaasha Deegaanka waxaa dooranaya muwaadiniinta degmo kasta muddo shan (5) sano ah, dibna waa loo soo dooran karaa. 4. Kala diridda Golayaasha Degaanka iyo luminta xubinnimada Golaha Deegaanka waxaa lagu qeexi doonaa xeerka Golayaasha Deegaanka ee Puntland Qodobka 124aad HABRAACA GOLAHA DEGAANKA 1. 2. 3. 4. Xubnaha Golaha Deegaanka fadhigooda ugu horeeya waxay iska dhex dooranayaan Guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen. Guddoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeenka faqradda 1aad ku xusani waa Duqa degmada iyo ku xigeenkiisa. Duqa Degmada waa madaxa fulinta ee Dawladda Deegaanka iyo xiriiriyaha Golaha Deegaanka iyo Maamulka Gobolka. Duqa Degmada wuxuu Golaha hordhigayaa, si looga doodo, dabadeedna loo ogolaado, xubnaha Guddiga Joogtada ah ee Degmada oo aynan xubnihiisu ka badnaan karin saddex dalool hal dalool (1/3) ee Golaha. Guddiga Joogtada ah oo uu guddoomiye u yahay Duqa Degmada, waxa ay masuul ka noqonayaan meelmarinta goaannada Golaha iyo fulinta hawl-maalmeedka maamulka degmada.
Bogga 58 Qodobka 125aad AWOODAHA IYO XILALKA GOLAHA DEEGAANKA 1. Golaha deegaanku wuxuu ka qeyb qaataa fulinta qorsheyaasha dawladda ee heer degmo oo ku wajahan adeegyada bulshada sida: Waxbarashada Asaasiga ah, caafimaadka, Xannanada Xoolaha, beeraha, nabadgelyada, biyaha, korontada, isgaarsiinta, ilaalinta deegaanka iyo guud ahaan mahsaariicda horumarineed ee heer degmo. 2. Goaaminta, wax ka beddelidda iyo joojinta khidmadaha laga qaado dadweynaha ee la xiriira adeegyada uu fuliyo golaha deegaanku, iyo goynta tabarrucaadyo gaar ah oo laga rabo dadweynaha, laguna maalgeliyo mashaariicda hawlaha guud ee laga fuliyo deegaanka. 3. Oggolaanshaha iyo u baahinta dadweynaha ku talo-galka miisaaniyad-sanadeedka degmada oo ah dakhli iyo kharash isu dheellitiran. 4. Shaqaalaynta, dallacsiinta iyo ruqsaynta shaqaalaha dawladda hoose. 5. Dejinta sharci-hoosaadyo iyo awaamiir lagu fulinayo hawlaha iyo adeegyada loo qabanayo dadweynaha degmada. 6. Diyaarinta canshuuraha degmada loona gudbiyo wasaaradda ku shaqada leh si looga ansixiyo Golaha Wakiillada. 7. Dejinta qorshaha horumarinta degmada, hirgelintiisana ay la kaashadaan maamulka dhexe ee Puntland. 8. Golaha Deegaanka degmo kasta wuxuu maamulaa hantida iyo dakhli kasta oo gacantooda soo gala, wuxuuna xisaab-celin tifaftiran u gudbiyaa Hanti-Dhowrka Guud. 9. Gacan ka geysashada mashaariicda horumarineed ee ay degmada ka fulinayaan Heyadaha Dawladda ee heer Qaran, Puntland iyo gobol. 10. Isticmaalka awoodaha iyo gudashada xilalka ay siiyaan Dastuurka iyo shuruucda kale.
Qodobka 126aad SHURUUDAHA DOORASAHADA XUBNAHA GOLAHA DEEGAANKA 1. Muwaaddin kasta oo Muslim ah, guta waajibaadka diiniga ah, xilkas ah, garaadkiisu dhan yahay, Puntlandar ah, dadiisuna aanay ka yarayn shan iyo labaatan (25) sano waa loo dooran karaa inuu xubin ka noqdo Golayaasha Deegaanka ee Puntland. 2. Waa inuu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi dhexe ama wax u dhigma. 3. Waa inaan la laalin xuquuqdiisa muwaaddinnimo shantii (5) sano ee ugu dambeysay. 4. Qofka isu sharraxaya xubin Golaha Deegaanka waa inuu yahay muwaadin Puntlandar ah, aqoonna u leh saldhigga iyo seynsaabka bulshada deegaankiisa. QODOBKA 127aad AWOODAHA IYO XILALKA DUQA DEGMADA Duqa degmadu waa madaxa laamaha dawladda ee degmada wuxuuna guddoomiyaa shirarka Guddiyada horumarinta iyo nabadgelyada. Wuxuu kormeeraa dhammaan shaqada Dawladda ee Degmada. Wuxuu gudoomiyaa kulannada ay isugu yimaadaan guddiyada tuulooyinka. Waa madaxa fulinta Dawladda Deegaanka, wuxuuna isku xiraa maamulka Degmada iyo kan Gobolka. Wuxuu u xilsaaran yahay fulinta goaanada Golaha Deegaanka iyo hawl-maalmeedka maamulka Degmada. Shuruudaha lagu dooranayo Duqa Degmada waa kuwa ku xusan qodobka 122aad ee Dastuurka.
Bogga 60 Madaxa V HANNAAANKA MAAMULKA PUNTLAND Qaybta 1aad SHAQAALAHA RAYIDKA Qodobka 128aad SHAQAALAHA RAYIDKA EE DAWLADDA 1. Saraakiisha Dawladda iyo shaqaalaha rayidka ahi waxay u adeegaan dadweynaha iyo Dawladda Puntland, umana daneeyaan garabyo siyaasadeed iyo koox gaar ah, waxaana ay xilkooda u gutaan si waafaqsan Dastuurka iyo sharciyada Puntland. Waa reebban tahay in xafiisyada dawladda loo isticmaalo ujeeddooyin siyaasadeed iyo dano gaar ah. 2. Saraakiisha iyo shaqaalaha Dawladda waxaa lagu qaadanayaa tartan furan oo ku saleysan aqoon iyo karti, loogumana kala eexan karo tixgelin la xiriirta kala raacsanaanta siyaasadaha jira, sokeeyanimo iyo xiriir saaxiibtinimo. 3. Waxaa la aqoonsanayaa taxanaha shaqo ee shaqaalaha rayidka ee Dawladda. Sharci gaar ah ayaa lagu maamulayaa habraacyada shaqa qorista, kala astaynta jagooyinka, dallacaadaha, tababarka, ruqsaynta, xuquuqda iyo dhammaan arrimaha kale oo ku saabsan shaqaalaha Dawladda. 4. Sharciga ayaa caddaynaya shaqaalaha aan xisbiyada siyaasadda ka qaban karin mansabyo hoggaamineed. Qodobka 129aad MABAADIIDA MAAMUL-WANAAGGA Dhammaan Saraakiisha iyo shaqaalaha dawladdu waxay xilalkooda u gudanayaan si waafaqsan mabaadiida soo socota: b. Waxay ku goaan qaadanayaan si waafaqsan danaha guud oo aan ku xirnayn dan gaar ah. t. Waa inay ka taxadaraan xaalad saamayn khaldan ku yeelan karta xil gudashadooda, amaba shaki gelin karta hufnaantooda. j. Goaannada waxaa lagu salaynayaa oo keliya mudnaanta ay leeyihiin.
Bogga 61 x. Qof kasta oo Sarkaal ah ama shaqaale dawladeed, waxaa lagula xisaabtamayaa natiijooyinka ka dhasha goaannada uu ka qaato waxqabadkiisa, waana inuu fududeeyo baaritaannada hawlihiisa oo ay wadaan hayadaha ku shaqada leh. kh. Goaannada la qaadanayo iyo hawlaha la fulinayo dhammaantood waa inay noqdaan kuwo aan mugdi iyo madmadow ku jirin, xogtoodana la heli karo. d. Sarkaal kasta waa inuu caddeeyo haddii ay jirto dan gaar ah isla markaana uu qaado tallaabooyin uu ku xallinayo arrimaha la soo gudboonaada ee goaannadiisa saamayn ku yeelan kara. Qodobka 130aad MAAMUL-XUMIDA AMA LUNSASHADA HANTIDA UMMADDA Sarkaal ama shaqaale kasta ee dawladeed oo si xun u maamula, lunsada lacag, hanti kale ee ummadeed ama ka qaybgala fal-dembiyeedyadaas, wuxuu geystay dembi culus, waxaana loo gudbinayaa hayadaha Sharciga. Qodobka 131aad XASAANADAHA 1. Xasaanad waxaa leh qaar ka mid ah masuuliyiinta dawladda si ay uga badbaadaan eedayn la maleegey ama cadaadis sharci darro ah iyaga oo masuuliyiintaasi gudanaya hawlihii ay u xilsaarnaayeen. 2. Ma jirto hayad awood u leh inay eedayso ama xirto Madaxweynaha iyo Madaxwene ku xigeenka haddii aan la marin habraacyada sharci ee ku cad qodobka 82- aad ee Dastuurka. 3. Xubin kasta oo ka mid ah Golaha Wakiillada lama xiri karo, lamana baari karo jirkiisa, deegaankiisa, xafiiskiisa, iyo gaadiidka uu markaas wato, lagumana oogi karo dacwado dembiyo culus laga bilaabo maalinta la doorto amaba la magacaabo ilaa uu ka dhammaysto muddada la doortay ama la magacaabay ama uu is casilo, haddii uunan Golaha Wakiilladu ka xayuubin xasaanadda. Dambiyada iyo khaldaadka aan cuslayn oo ay galaan xubnaha Golaha Wakiilladu laguma xiri karo loogumana yeeri karo inay maxkamadda horteeda qiraal ka baxshaan, marka laga reebo dacwadaha madaniga ah. 4. Dhammaan Hawlwadeennada Golaha Wakiilladu doorto ama ogolaado magacaabidooda waxay leeyihiin xasaanad, sidaaa darteedna lama xiri karo, lamana baari karo jirkiisa, deegaankiisa, iyo gaadiidka uu markaas wato, dacwadna laguma oogi karo, haddii aan Xeer-Ilaaliyaha Guud Golaha Wakiillada weydiisan in
Bogga 62 xasaanadda laga xayuubiyo, haddii Goluhu ku qanco in uu jiro fal dalbiyeed ciqaab lagu mudan karo, waa la hakinayaa xilkiisa, waxaana la hor geynayaa maxkamadda awoodda u leh si ay xukun ku habboon uga gaarto, fal-dambiyeedka lagu eedeeyey. 5. Garsoorayaasha Maxkamadaha rafcaanka iyo kuwa darajada koowaad lama xiri karo haddii aan lagu qaban, iyagoo faldenbiyeed gacanta kula jira, degaankooda iyo gaadiidkoodana lama baari karo, dacwadna laguma oogi karo, haddii aan Guddiga Sare ee Garsoorku ogolaan codsi ka yimid Xeer-Ilaaliyaha Guud oo la xiriira in xasaanadda laga qaado. 6. Haddii masuul ka mid ah kuwa ku xusan faqradaha 2,3,4 ee qodobkan la qabto iyaga oo faldambiyeed gacanta kula jira, waxaa la wargelinayaa Guddoomiyaha Golaha Wakiillada, Hoggaanka Golaha ayaana goaan ka gaaraya meesha lagu haynayo tan iyo inta la dhammaystirayo habraaca lagu goaaminayo in xasaanadda laga qaado iyo in kale. Haddii masuulka la qabto yahay garsoore waxaa loo gacangelinayaa Guddoomiyaha Maxkamadda Sare. 7. Xubnaha Golaha Deegaanka lama xiri karo lamana baari karo jirkiisa, deegaankiisa iyo gaadiidka uu markaas wato, haddii aan Golaha Deegaanku ogolaan codsi xasaanad ka qaadis ah oo uu soo gudbiyey Xafiiska Xeer-Ilaalinta Guud ama aan lagu qaban isagoo faraha kula jira fal-dambiyeed culus. 8. Guddoomiyayaasha Gobollada iyo ku xigeenadoodu waxay leeyihiin xasaanad xil, sidaa awgeed lama xiri karo lamana baari karo jirkooda, Degaankooda iyo gaadiidka ay markaas wataan, haddii aan Madaxweynuhu ogolaan codsi xasaanad ka qaadis oo uu soo gudbiyey Xafiiska Xeer-Ilaalinta Guud, ama aan lagu qaban iyagoo faraha kula jira fal-dambiyeed culus. Qodobka 132aad DHAARTA DASTUURIGA AH Qof kasta oo xil sare ka qabanaya Dawladda Puntland, Maxkamadda Sare ayaa u dhaarinaysa xilka loo dhiibey inta uusan xilka qaban, wuxuuna marayaa dhaartan: Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay, in aan ku dhaqmo Diinta Islaamka, Dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhawro, xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto, dalka iyo dadkiisana Lillaahi ugu adeego.
Bogga 63 Qaybta 2aad MAALIYADDA DAWLADDA Qodobka133aad HANTIDA DAWLADDA Hantida Dawladda Puntland waxay ka kooban tahay:
b. Dhammaan lacaagaha caddaanka ah ee Dawladda. t. Deymaha taagan oo laga qabo Dawladda. j. Hantida guurtada, ma-guurtada iyo badeecadaha Dawladda ee ku saleysan qaab sharci ah. x. Xuquuqaha ay Dawladdu ku heli karto hirgalinta shuruucda canshuuraha iyo deeq kasta oo uu sharcigu jideynayo. Kh. Maaliyadda Dawladda waxaa laga qaameyn karaa deyman dawladdu aqoonsantaay iyo kharashyada Dawladda oo si sharci ah loo jideeyay. d. Hadiyadaha la siiyo Madaxdda dawladda ee leh muuqaal qaran. Qodobka 134aad MASUULIYADDA DARYEELKA HANTIDA IYO MAALIYADDA DAWLADDA 1. Dhammaan dadweynaha Puntland waxaa waajib ku ah daryeelka iyo dhawridda hantida Dawladda. 2. Saraakiisha iyo shaqaalaha Dawladda waxaa waajib gaar ahi ka saaran yahay xannaanaynta hantida Dawladda oo ay masuulka ka yihiin si ay ugu gutaan waajibkooda shaqo. 3. Madaxda maamulka hayad kasta ee Dawladeed ee heer Puntland, gobol iyo degmo ayeey saaran tahay masuuliyadda sharci ee diiwaan gelinta iyo dhaqangelinta waajibaadka ku xusan faqradaha 1aad iyo 2aad ee qodobkan.
Bogga 64 4. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda iyo Hantidhawraha Guud ayaa sharciyan masuuul ka ah dhaqangalinta waajibaadkan. 5. Qaybta fulinta ee Dawladda Puntland oo u sii mareysa Wasiirka Maaliyadda ayaa masuul ka ah maaraynta Maaliyadda Dawladda. Qodobka 135aad MIISAANIYADDA DAWLADDA 1. Miisaaniyadda Dawladdu waa sharci qeexaya dhammaan dakhliga Dawladdu fileyso in ay hesho sanad-maaliyadeedka iyo dhammaan kharashyada ay damacsantahay in ay gasho si ay u gaarto himilooyinkeeda. 2. Sannad-Maaliyadeedka Puntland wuxuu bilawdaa 1da bisha Jannaayo, wuxuuna dhammaadaa 31ka Disembar ee isla sannadkaas. 3. Wakaaladaha madaxbannaan ee Dawladda iyo hayad kasta oo gebi ahaan ama qayb ahaan lagu maalgeliyo hanti Dawladeed waxay yeelanayaan miisaaniyad u gaar ah oo ku lammaan miisaanniyadda guud ee Puntland, waxaana meelmarinaya Golaha Wakiillada. 4. Sharci gaar ah ayaa tilmaamaya dhammaan arrimaha la xiriira diyaarinta, oggolaanshaha, dhaqangelinta iyo warbixinta natiijada miisaaniyadda. 5. Haddii aan Golaha Wakilladu ogolaan Miisaaniyadda cusub ee Dawladda sanadka bilowgiisa, sabab kasta ha ku timaadee, waxaa lagu sii dhaqmayaa miisaaniyadda sannadkii hore muddo bil ah. Qodobka 136aad HABRAACA MIISAANIYADDA Ku-talagalka Miisaaniyadda Dawladda, waxaa soo abaabula Wasiirka Maaliyadda isaga oo ku salaynaya oddoroska Wasaaradaha iyo Hayadaha kale ee Dawladda iyo xogta ay ururiyeen, iskuna dubbarideen khubarada Maaliyadda iyo shaqaalaha kale ee Waaxda Miisaaniyadda ee isla Wasaaradda, waana in loo gudbiyaa Golaha Wasiirada ugu dambeyn 10ka Oktoobar. Miisaaniyadda Golaha Wasiiradu ogolaaday waa in la horgeeyaa Golaha Wakiillada si ay u ogolaadaan, wax uga bedelaan ama celiyaan.
Bogga 65 Qodobka 137aad XISAAB-XIRKA SANNAD-MAALIYADEEDKA 1. Xisaab-xirka sannad-maaliyadeed kasta waa in Wasaaradda Maaliyaddu horgeyso Golaha Wakiillada ugu dambeyn 30-ka Juun, ee sanadka xiga si uu uga doodo kadibna u ansixiyo ama u diido. 2. Haddii Golaha Wakiilladu diido xisaab-xirka sannad-maaliyadeedka, waxaa waajib noqonaysa inuu Goluhu u gudbiyo Xafiiska Xeer-Ilaaliyaha Guud isagoo raacinaya sababihii lagu diiday, si uu baaris sharci ah u sameeyo, ciddii masuuliyad ciqaabeed yeelatana sharciga u horgeeyo. Madaxa VI SARRAYNTA IYO DIB-U-HABEYNTA DASTUURKA IYO KU DHAQAN KUMEELGAAR AH Qodobka 138aad DOORKA SHARCI EE DASTUURKA 1. Dastuurka Puntland waa sharciga ugu sarreeya Puntland, marka laga reebo shareecada Islaamka. 2. Xeer, xeer hoosaad iyo wareegto kasta ee fulineed oo ka soo horjeedda shareecada Islaamka iyo Dastuurka Puntland waa waxba kama jiraan. Qodobka 139aad WAX KA BEDDELIDDA DASTUURKA 1. Hindisaha wax ka beddelidda Dastuurka waxaa soo jeedin kara: b. Shan meelood oo meel (1/5) Xubnaha Golaha Wakiillada. t. Golaha Xukuumadda. j. Ugu yaraan shan kun (5000) oo muwaadiniin codbixiyayaal ah. 2. Markii soo jeedinta ay soo gaarto Golaha Wakiillada, waxaa falanqeynaya guddi gaar ah. Guddigu wuxuu soo jeedinayaa talo-bixin uu Goluhu ka doodayo, dabadeedna uu ku ansaxiyo hal dheeri.
Bogga 66 3. Golaha Wakiillada wuxuu sameynayaa olole wargalin oo ku saabsan dib-u-habeynta, si loo xaqiijiyo in dadweynaha oo dhan ay xog-ogaal ugu noqdaan isbadalka lagu sameyanayo Dastuurka. 4. Muddo aan bil ka yareyn kadib, Goluhu wuxuu u soo bandhigayaa soo jeedinta in lagu ogolaado ama lagu diido tiro dhan saddex meelood labo (2/3). 5. Wax ka bedelka qodobada 1-aad, 2-aad, 3-aad, 4-aad, 9-aad iyo 13-aad ee madaxa 1-aad qeybtiisa 1-aad ee Dastuurka, ka dib marka la maro habraacyada ku cad faqradaha hore ee qodobkan waxaa loo bandhigayaa afti dadweyne. 6. Wax ka beddelidda Dastuurka waxaa lagu baahinayaa Faafinta Rasmiga ah loomana cuskan karo diidmada qayaxan ee Madaxweynaha. Qodobka 140aad ISWAAFAJINTA DASTUURKA PUNTLAND IYO DASTUURKA JAMHUURIYADDA FEDARAALKA EE SOOMAALIYA 1. Marka la ansixiyo Dastuurka Federaalka Soomaaliya intaan afti loo qaadin Golaha wakiilladu waxay magacaabayaan guddi gaar ah oo dib-u-eegid ku sameeya Dastuurka Puntland si uu u waafajiyo Dastuurka federaaliga ah. 2. Guddiga gaarka ah ee dib-u-eegidda Dastuurka Puntland, wuxuu la tashanayaa Golaha Fulinta, Maxkamadda Dastuuriga, Xeer-Ilaaliyaha Guud, masuul kasta ama qof kasta oo uu u arko inuu tala ku biirinayo inta lagu guda jiro isku dubbarididda talooyinka wax ka beddelidda Dastuurka Puntland. 3. Guddiga Gaarka ah ee dib-u-eegista Dastuurka Puntland hindisaha is waafajinta labada dastuur wuxuu u bandhigayaa Golaha Wakiillada, si uu uga doodo uguna oggolaado cod aqlabiyad hal-dheeri ah (1/2+1). 4. Hogaanka Golaha Wakiilladu wuxuu si degdeg ah ugu gudbinayaa Madaxweynaha isbeddellada Dastuurka Puntland lagu sameeyay si uu u saxiixo faafinta rasmiga ahna loogu soo saaro. 5. Waxaa reebban in guddiga gaarka ah loo adeegsado wax ka beddelidda Dastuurka ee ka baxsan iswaafajinta Dastuurka federaalka iyo kan Puntland. Qodobka 141aad DHAQANGALKA DASTUURKA
Bogga 67 1. Dastuurkani wuxuu si rasmi ah u dhaqangelayaa marka lagu ogolaado afti dadweyne, aftidaas waxaa loo qaadi karaa si baahsan ama si kooban. 2. Inta Aftida ka horeysa wuxuu Dastuurkani sii ahaanaya mid sharci ah oo lagu sii dhaqmo, laga bilaabo marka uu Golaha Wakillada ee Puntland ansixiyo, isagoo bedelaya kii ka horeeyay ee ku meel gaarka ahaa.
MAR XALADDA KALA GUURKA Guddiga Doorashada Puntland ee ugu horreeya waa ku meel gaar, waxaa laga dhex dooranayaa Dadwaynaha, wuxuuna ka koobnaanayaa sagaal (9) xubnood. shan (5) uu Madaxweynuhu magacaabo, Golaha Wakiilladuna ansixiyo iyo afar (4) Golaha Wakiilladu soo sharraxo ka dibna ansaxiyo. Guddigu wuxuu u xilsaaran yahay qabashada Aftida Dastuurka iyo doorashooyinka Golayaasha Degaanka ee ugu horreeya, xilkiisuna wuxuu ku eg yahay ku dhawaaqidda natiijooyinka doorashooyinka Golayaasha Degaanka iyo sharciyeynta xisbiyada siyaasadda. Inta lagu jiro muddada xilhayntiisa, Guddigu wuxuu leeyahay awoodaha ku cad Qodobka 114 ee Dastuurka Puntland. Marka ay dhammaato muddada xilhaynta Guddiga Koowaad waxaa la dooranayaa Guddiga Doorashada Puntland ee rasmiga ah, si waafaqsan Madaxa IV, Qaybta 5aad, Xubinta 3aad ee Dastuurka Puntland. Golayaasha Deegaanka oo doorashadoodu ku beeganto furitaanka axsaabta ka hor waa la soo gaabin karaa ama la kordhin karaa muddada xilkooda. Haddii Dastuurka lagu diido afti dadweyne waxaa lagu sii dhaqmayaa si ku meel gaar ah Dastuurka la diiday inta laga dhamaystirayo Dastuur kale oo afti dadweyne lagu ogolaaday.